အစားအစာဆုအတွက် ghrelin ၏အခန်းက္ပ - sucrose ကိုယ်တိုင်အုပ်ချုပ်ရေးနှင့် mesolimbic dopamine နှင့် acetylcholine receptor gene expression အပေါ်အကျိုးသက်ရောက်မှု ghrelin ၏အကျိုးသက်ရောက်မှု (၂၀၁၂) - Your Brain On Brain
အစားအစာဆုလာဘ်အတွက် ghrelin ၏အခန်းက္ပ: sucrose Self-အုပ်ချုပ်ရေးနှင့် mesolimbic dopamine အပေါ် ghrelin ၏သက်ရောက်မှုနှင့် acetylcholine receptor မျိုးရိုးဗီဇစကားရပ် (2012)
စှဲလမျးသူ Biol ။ 2012 ဇန်နဝါရီ; 17 (1): 95-107 ။
Karolina P ကို ​​Skibicka, ကယ်ရိုလိုင်း Hansson, Emil Egeciogluနှင့် Suzanne L ကို Dickson
အစာစားရန်ဆုံးဖြတ်ချက်သည်အိမ်တွင်းမဟုတ်သောအချက်များဖြစ်သောအစားအစာအတွက်အာဟာရဖြစ်စေသည့်အချက်များကြောင့်ဖြစ်သည်။ အမှန်မှာအစားအစာ၏အကျိုးနှင့်လှုံ့ဆော်မှုတန်ဖိုးသည် homeostatic အချက်ပြမှုကိုကျော်လွှားနိုင်သဖြင့်စားသုံးမှုတိုးပွားလာပြီးအဝလွန်ခြင်းကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။ Ghrelin, အူ - ဆင်းသက်လာ orexigenic hormone, homeostatic နို့တိုက်ကျွေးရေးအတွက်ထင်ရှားသောအခန်းကဏ္ has မှရှိသည်။ သို့သော်မကြာသေးမီက၎င်းသည် mesolimbic dopaminergic ဆုလာဘ်လမ်းကြောင်း၏စွမ်းရည်ပြည့်စုံသော modulator အနေဖြင့်ထွက်ပေါ်လာခဲ့ပြီးအစားအစာဆုအတွက် ghrelin အတွက်အခန်းကဏ္suggestကိုအကြံပြုသည်။ ဤနေရာတွင် ghrelin နှင့်ယင်း၏ receptors များသည်သဘာဝသကြားအကျိုးကျေးဇူးအတွက်လှုံ့ဆော်မှုကိုအားဖြည့်ရန်အတွက် grrelin receptor (GHS-R1A) ကိုလှုံ့ဆော်ခြင်းနှင့် sucrose progressive ratio operant အေးစက်မှုအတွက်ပိတ်ဆို့ခြင်း၏အခန်းကဏ္examကိုစစ်ဆေးခြင်းအားဖြင့်အရေးကြီးသည်လားဆုံးဖြတ်ရန်ကြိုးစားသည်။ ဆုတစ်ခုရယူပါ Peripheral နှင့် centrally အုပ်ချုပ်သော ghrelin သိသိသာသာတိုးလာအော်ပရေတာတုံ့ပြန် sucrose များအတွက်မက်လုံးပေးလှုံ့ဆျောမှု။ GHS-R1A ၏ရန်ဘက်ပြုသော JMV2959 ကိုအသုံးပြုခြင်းအားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည် GHS-R1A အချက်ပြမှု၏ပိတ်ဆို့ခြင်းသည် sucrose အတွက်တုံ့ပြန်လုပ်ဆောင်မှုကိုလျော့နည်းစေသည်။ အဓိက ghol neurotransmitter receptors, encoding genes များ၏ဖော်ပြမှုအပေါ်နာတာရှည်အလယ်ပိုင်း Ghrelin ကုသမှု၏သက်ရောက်မှုကိုအကဲဖြတ်ခြင်းအားဖြင့်အဓိက mesolimbic ဆုလာဘ် node များ, ventral tegmental (ရိယာ (VTA) နှင့်နျူကလိယ accumbens အပေါ် ghrelin ၏သက်ရောက်မှုများကိုထပ်မံလေ့လာခဲ့သည်။ Ghrelin ကုသမှုကိုတိုးမြှင့်သော dopamine receptor D5 နှင့် acetylcholine receptor nAChRβ2ဗီဇစကားရပ်နှင့်ဆက်စပ်ခဲ့ပြီး NAcc တွင် D1, D3, D5 နှင့်nAChRα3တို့၏ဖော်ပြချက်လျော့နည်းသွားသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏အချက်အလက်များအရ ghrelin သည် sucrose နှင့်လှုံ့ဆော်ခြင်းနှင့်အားဖြည့်ခြင်းအတွက်အရေးကြီးသောအခန်းကဏ္ plays မှပါ ၀ င်ကြောင်းဖော်ပြသည်။ ၎င်းသည် dopamine နှင့် acetylcholine encoding genes တို့၏ဖော်ပြချက်အပေါ်သက်ရောက်မှုများရှိသည်။ ဤတွေ့ရှိချက်များအရ ghrelin ၏ရန်သူသည်အဝလွန်ခြင်းကိုကုသရန်နှင့်ချိုသောအစာအလွန်အကျွံသုံးစွဲမှုကိုတားဆီးရန်ကုထုံးဆိုင်ရာအလားအလာရှိသည်ဟုဖော်ပြသည်။
keywords: Acetylcholine, dopamine, အစားအစာလှုံ့ဆျောမှု, ghrelin, GHS-R1A, Operations အေးစက်
ဒါဟာ (ထိုပျံ့နှံ့နေတဲ့ဟော်မုန်း ghrelin စွမ်းအင်ဟန်ချက်၏စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းအတွက်အရေးပါသောအခန်းကဏ္ဍကြောင်းကောင်းမွန်စွာထူထောင်ဖြစ်ပါတယ်Kojima et al။ 1999; Nogueiras, Tschöp & Zigman 2008) ။ အစာအိမ်အားဖြင့်အဓိကအားဖြင့်ဖြန့်ချိ (Dornonville de la Cour et al။ 2001), ghrelin (ကြွက်နှင့်လူနှစ်ဦးစလုံးအစွမ်းထက် orexigenic သက်ရောက်မှု elicitsWren et al။ 2000, 2001) က၎င်း၏ဗဟိုအာရုံကြောစနစ် (CNS) အဲဒီ receptor (၏ဆွကနေတဆင့်ရှာလုံet al။ 2009a), ကြီးထွားဟော်မုန်း secretagogue အဲဒီ receptor (GHS-R1A) (Howard et al။ 1996) ။ အမှန်စင်စစ် ghrelin (နို့တိုက်ကျွေးရေးနှင့်စွမ်းအင် homeostasis တွင်ပါဝင်ပတ်သက် hypothalamic နှင့်ဦးနှောက်ကို stem ဆားကစ်ပစ်မှတ်ထားDickson, Leng & ရော်ဘင်ဆင် 1993; ဘေလီ et al။ 2000; Hewson & Dickson 2000; Faulconbridge et al။ 2003, 2008) ။ အပြုအမူအစာကျွေး, သို့သော်, အာဟာရတှေအမြားကွီး (homeostasis restore လုပ်ဖို့ဆိုလိုသည်မှာလိုအပ်ကြောင်း) အတွက်လိုအပ်သဖြင့်လှုံ့ဆော်နေသည်မသာ; အရေးပါတယ်လို့ High-ဆီဥနှင့် / သို့မဟုတ်သကြားပါတဲ့အစားအစာ (မွတ်မပြေတဲ့ပြည်နယ်ရှိနေသော်လည်းစားသုံးမှုလှုံ့ဆျောပေးနိုငျZheng et al။ 2009) ။ ထိုကဲ့သို့သောသကြားအဖြစ်အရေးပါတယ်လို့သဘာဝကစစ်ကူ၏ overconsumption လက်ရှိအဝလွန်ခြင်းကပ်ရောဂါကားမောင်းနေတဲ့အဓိကအချက်တစ်ချက်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာဗဟို ghrelin အချက်ပြစနစ်ကအားဖြင့်တစ်ဦးအတွက်ကယ်လိုရီ၏စားသုံးမှုနှိမ်နင်းရန်အလားအလာအရေးကြီးသောကုထုံးပစ်မှတ်, အရေးပါတယ်လို့များနှင့်အကြိုးချိုမြိန်အစားအစာများကိုပေး, Non-homeostatic သကြားစားသုံးမှုများအတွက်အရေးကြီးပါသည်ရှိမရှိဆုံးဖြတ်ပေးဖို့နေဆဲဖြစ်သည်။
ghrelin Non-homeostatic / ဆုလာဘ်နို့တိုက်ကျွေးမှု (များတွင်ပါဝင်ပတ်သက် mesolimbic ဒေသများနှင့်အတူအပြန်အလှန်ဆက်သွယ်ကြောင်းမကြာသေးမီတွေ့ရှိချက်များအားဖြင့်မှုတ်သွင်းJerlhag et al။ 2007), ကျနော်တို့အစားအစာလှုံ့ဆျောမှုနှင့် sucrose အကျိုးသည်ရည်မှန်းချက်-ညွှန်ကြားအပြုအမူအတွက် ghrelin နှင့်၎င်း၏အဲဒီ receptor ၏အခန်းကဏ္ဍကိုအကဲဖြတ်ရန်ရှာ၏။ သူတို့အလွဲသုံးစားမှုအများစုမူးယစ်ဆေးများအတွက်အဓိကပစ်မှတ်ဖြစ်သကဲ့သို့ဤသူတို့သ mesolimbic ဒေသများရှည်လျား (မူးယစ်ဆေးစွဲသုတေသန၏အာရုံဖြစ်ရပြီအိန်ဂျယ် 1977; Koob 1992) ။ ghrelin များအတွက်ပစ်မှတ် mesolimbic လမ်းကြောင်းအတွက်နျူကလိယ accumbens ဖို့ ventral tegmental ဧရိယာ (VTA) ကနေ dopamine Project (NACC) (ပါဝင်သည်Jerlhag et al။ 2006, 2007စွဲလမ်းစေဓာတုမူးယစ်ဆေးနှင့်အစားအစာအပါအဝင်သဘာဝကဆုလာဘ်, (နှစ်ဦးစလုံးထံမှဆုလာဘ်ဆွေးနွေး), တစ်လမ်းKoob 1992) ။ စိတ်ဝင်စားစရာ GHS-R1A (dopaminergic အာရုံခံအပေါ်ထုတ်ဖော်ပြောဆိုဖြစ်ပါတယ်Abizaid et al။ 2006), VTA dopamine စနစ်အပေါ် ghrelin ၏ဖြစ်နိုင်သောတိုက်ရိုက်သက်ရောက်မှုဆိုလို။ ဤရွေ့ကား immunohistochemical ဒေတာစုဆောင်းအပြုအမူများနှင့် VTA အတွက် ghrelin ရဲ့အကျိုးသက်ရောက်မှု၏ electrophysiological သက်သေအထောက်အထားများအားဖြင့်ဖြည့်ထားသည်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ Ghrelin ကို VTA ၏အုပ်ချုပ်မှုက VTA dopamine neuron များ၏လုပ်ဆောင်မှုကိုတိုးစေသည်။Abizaid et al။ 2006) နှင့် NACC သို့ dopamine များလွှတ်ပေးရန်တိုးပွါး (Jerlhag et al။ 2007) ။ Ghrelin သည် cholinergic-dopaminergic link ၏အရေးပါသောအကျိုးရလဒ်လမ်းကြောင်းကိုလည်းတိုးပွားစေသည်။ အမှန်မှာ၊ ghrelin ၏ dopamine အပေါ်အနည်းဆုံးသက်ရောက်မှုအချို့သည် cholinergic system (ကလိုရင်းဆေးစနစ်) ကကြားဝင်စေ့စပ်ပေးသည်။Jerlhag et al။ 2007).
ghrelin တစ်အစွမ်းထက် orexigenic အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိပါတယ်အစားအစာအလွယ်တကူရရှိနိုင်သည့်အခါ, ကသေး ghrelin ၏ orexigenic သက်ရောက်မှုလှုံ့ဆျောမှုပြောင်းလဲနေတဲ့နှင့်ထိုကဲ့သို့သောလိုသောတိုးပွားလာအရေးပါတယ်လို့ချိုမြိန်အစားအစာ (ဆိုလိုသည်မှာအဖြစ်သဘာဝကစစ်ကူ၏ရှုထောင့်အားဖြည့်ထည့်သွင်းရန်တိုးချဲ့နိုင်ပါတယ်ရှိမရှိမသိရကြောင်းထူထောင်နှင့်နေစဉ် ကြိုးစားအားထုတ်မှု / အလုပ်ကိုတဦးတည်း) တစ်ဦးချိုမြိန်အားရစရာရယူထဲသို့သွင်းထားရန်ဆန္ဒရှိသည်။ စွဲလမ်း၏မူးယစ်ဆေးဝါးများ၏လှုံ့ဆော်မှုများနှင့်ဆုလာဘ်ထိရောက်မှုကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ရေး, Operations အေးစက်မော်ဒယ်အတွက်အကဲဖြတ်နိုင်ပါတယ်။ အော်ပရေတာအေးစက်အကျိုးကိုရယူဆီသို့ညွှန်ကြားဝယ်ယူခြင်းနှင့်မိမိဆန္ဒအလျောက်အပြုအမူအကဲဖြတ်ထားပါသည်ကြောင်းလှုံ့ဆော်အပြုအမူများ၏ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာများအတွက်ကျောင်းအုပ်ကြီးလုပ်ထုံးလုပ်နည်းဖြစ်ပါတယ်။ အကြောင်းအရာအကျိုးကိုရရှိရန်သုံးစွဲလိုလိုလားလားအလုပ်ပမာဏကိုတိုင်းတာခြင်းအားဖြင့်, က (ဆုလာဘ်တန်ဖိုးထားတဲ့ရည်မှန်းချက်အတိုင်းအတာကမ်းလှမ်းHodos 1961) ။ Mesolimbic ဒေသများနို့တိုက်ကျွေးမှုကြောင့် ghrelin သက်ဆိုင်ရာ mesolimbic ဒေသများတွင်အာရုံခံလှုပ်ရှားမှုထိခိုက်စေသောရှင်းပါတယ်အပါအဝင်အပြုအမူများ၏စိတ်ခွန်အားနိုးရှုထောင့်အဘို့အလွန်အရေးပါဖြစ်ကြသည်။ အဘယ်အရာကိုသေးပြသနိုင်ခြင်းမရှိသေးပေ High-သကြားအစားအစာများအတွက်လှုံ့ဆျောမှုအပေါ် ghrelin ၏တိုက်ရိုက်အကျိုးသက်ရောက်မှုဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့လေ့လာမှု၏အဓိကရည်ရွယ်ချက်မှာဗဟို ghrelin အချက်ပြစနစ်ကတစ်ဝတ္ထုရွေးချယ် GHS-R1A ရန် JMV2959 (အသုံးချဖို့, High-သကြားအစားအစာဆုလာဘ်များနှင့်ဤစနစ်၏ဖိနှိပ်မှုမရှိစိတ်ခွန်အားနိုး / hedonic သို့မဟုတ်အပြုသဘောအားဖြည့်ဂုဏ်သတ္တိများအတွက်အခန်းကဏ္ဍရှိမရှိစုံစမ်းစစ်ဆေးရန်ဖြစ်ပါသည်ရှာလုံet al။ 2009a), သကြားလုံးရရှိရန်လှုံ့ဆော်မှုဖိနှိပ်လို့ရပါတယ်။ ghrelin အချက်ပြ၏ဖိနှိပ်မှု (ဂလူးကို့စ homeostasis အပေါ်အကျိုးရှိသောသက်ရောက်မှုရှိပါတယ်အဖြစ် GHS-R1A ရန်လက်ရှိတွင်အမျိုးအစား2ဆီးချိုလူနာအတွက်ကုထုံးအကဲဖြတ်လျက်ရှိသည်နေ et al။ 2006), ကိုလည်းချိုမြိန်အစားအစာလျော့ချစားသုံးမှုမှအကျိုးမယ်လို့ဆိုးကျိုးများ။ သက်သေအထောက်အထားများအများအပြားလိုင်းများ dopaminergic နှင့် cholinergic neurotransmission လှုံ့ဆော်မှုဆုလာဘ်အပြုအမူအတွက်အရေးပါသောအခန်းကဏ္ဍကြောင်းအကြံပြုအပ်ပါသည်။ ထို့ကြောင့်, နောက်ထပ်ဗဟိုဆုလာဘ် circuitry အပေါ် ghrelin ၏အကျိုးသက်ရောက်မှုများရဲ့အနှစ်သာရကမှကျနော်တို့ ghrelin ကုသမှုပြီးနောက်, key ကိုဆုလာဘ် node များအတွက် dopamine နဲ့ acetylcholine receptor မျိုးရိုးဗီဇစကားရပ်အပြောင်းအလဲများသည် VTA နှင့် NACC အပေါ် ghrelin ကုသမှု၏အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုအကဲဖြတ်။
အရွယ်ရောက်ပြီးသူအထီး Sprague-Dawley ကြွက် (200-250 ဂရမ်ချားလ်စ်မြစ်, ဂျာမနီ) တစ်ဦး 12 နာရီအလင်း / ပုံမှန်အစည်းအဝေး Chow နှင့်ရရှိနိုင်ပါသည်ရေနှင့်မှောင်မိုက်သံသရာ၌ကျိန်းဝပ်ခဲ့ကြသည် ကြော်ငြာ libitum, မဟုတ်ရင်ညွှန်ပြသည့်အခါ မှလွဲ. ။ အားလုံးတိရစ္ဆာန်အလုပျထုံးလုပျနညျးကျင့်ဝတ်ဆိုင်ရာခွင့်ပြုချက်နှင့်အတူနှင့်တက္ကသိုလ်ဂို၏ Institutional တိရိစ္ဆာန်စောင့်ရှောက်မှုနှင့်အသုံးပြုမှုကော်မတီလမ်းညွှန်ချက်များနှင့်အညီဆောင်ရွက်ခဲ့ကြသည်။
CNS ကိုပစ်မှတ်ထားသောအမူအကျင့်ဆိုင်ရာစမ်းသပ်မှုများအတွက်တတိယ ventricular လမ်းညွှန်ဆေးခြောက် (၂၆ gauge; Plastics One, Roanoke, VA, USA; coatesates) သည်အလယ်လတ်တွင်၊ bregma မှ ၂ မီလီမီတာနောက်ဘက်နှင့် dura mater သို့ ၅.၅ မီလီမီတာ ventral ဖြစ်သည်။ အဆိုပါ dura မှ ventral) isoflurane မေ့ဆေးအောက်မှာ implants ခဲ့သည်။ Cannulae များကိုသွားဖုံး acrylic နှင့် Jeweler's screw နှစ်ခုဖြင့် ဦး ခေါင်းခွံတွင်ချိတ်ထားပြီး obturator ဖြင့်ပိတ်ထားသည်။Skibicka, Alhadeff & Grill 2009) ။ တတိယ ventricle အတွက် cannula ၏နေရာချထား 5-thio-D-ဂလူးကို့စများ၏ဗဟိုဆေးထိုးဖို့ sympathoadrenal-mediated များသောတုံ့ပြန်မှုတိုင်းတာခြင်းအားဖြင့်တစုံတယောက်ကိုရက်သတ္တပတ်ခွဲစိတ်ကုသပြီးနောက်မှန်ကန်ကြောင်းအတည်ပြုခဲ့ပါတယ် ([မော်တော်ယာဉ်၏ 210 μl (ဆား) တွင်2μg]Ritter, Slusser & Stone 1981) ။ ဒီနေရာချထားစိစစ်အတည်ပြု protocol ကိုခုနှစ်တွင်အခြေခံပလာစမာဂလူးကို့စအဆင့်မှာအနည်းဆုံး 100% တစ် postinjection မြင့်ဘာသာရပ်ထည့်သွင်းဘို့လိုအပ်ခဲ့သည်။ အဆိုပါမျိုးဗီဇစကားရပ်စမ်းသပ်မှုအဘို့, ကြွက် anesthetized ခဲ့ကြသည် (60-75 / ကီလိုဂရမ် Ketalar နှင့် 0.5 / ကီလိုဂရမ် Domitor ip မောင်မောင်; Pfizer, ဆွီဒင်, Orion Co. , ဖင်လန်) နှင့်နာတာရှည် intracerebroventricular (ICV) cannula (Alzet ဦးနှောက်ပြုတ်ရည် Kit II ကို, DURECT ကော်ပိုရေးရှင်း, Cupertino,, CA, USA) အောက်ပါသြဒီနိတ်သုံးပြီးနှစ်ဦးနှစ်ဖက် ventricle သို့ထည့်သွင်းခဲ့သည်: bregma ထံမှ 0.6 မီလီမီတာ posterior, 1.4 မီလီမီတာ, midline ကနေဦးခေါင်းခွံကနေ 2.3 ventral lateral ။ အဆိုပါ cannula တစ်ခု osmotic minipump တစ် polyethylene ပြွန်မှတဆင့်ချိတ်ဆက်ခဲ့သည် (Alzet Mini ကို-Osmotic Pump မော်ဒယ် 2002, Durect, Cupertino, 0.5 နေ့ရက်ကာလအဘို့နှုန်း 14 μl / နာရီစီးဆင်း) တိရစ္ဆာန်၏နောက်ကျောများတွင်အရေပြားအောက်ဆုံးကိုထညျ့သှငျး။
အသံ-attenuated, Dimli- lit ဝန်ကြီးအဖွဲ့၌ထားကြ၏ရာ, (ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ-Associates မှ, ဂျော်ဂျီယာ, VT, အမေရိကန်နိုင်ငံ 30.5 × 24.1 × 21.0 စင်တီမီတာ) အော်ပရေတာအေးစက်စမ်းသပ်ချက်ကြွက်များအတွက်ဒီဇိုင်းရေးဆွဲရှစ်အော်ပရေတာအေးစက်အခန်းရာအရပျကိုယူ။ တစ်ခုချင်းစီကိုအခန်းထဲသို့, အဖြူရောင်သူတို့ကိုအထက်အလင်းမီးသီးများနှင့် 45 အစားအစာဗန်းမှ sucrose လုံးလေးများ (GlaxoSmithKline, စမ်းသပ်ခြင်းအစားအသောက်, Richmond, IN, အမေရိကန်နိုင်ငံ) MG ကယ်မနှုတ်နိုင်မယ့်အစားအစာကိုတောင့်သာသနာနှင့်အတူနှစ်ဦးကိုပြန်လည်ရုပ်သိမ်းပေးရန်ခရိုနီသတ္တုဇယားကွက်ကြမ်းပြင်ရှိခဲ့ပါတယ်။ အချက်အလက်စုဆောင်းခြင်းနှင့်အပြောင်းအလဲနဲ့ Med-PC ကို software ကို (ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ-Associates မှ, ဂျော်ဂျီယာ, VT, အမေရိကန်နိုင်ငံ) ကထိန်းချုပ်ထားခဲ့သည်။
အော်ပရေတာအေးစက်အတှကျအသုံးပွုအဆိုပါလုပ်ထုံးလုပ်နည်း (ထံမှအဆင်ပြေအောင်ခဲ့သည်la Fleur et al။ 2007) နှင့် (Tracy et al။ 2008) ။ အဆိုပါကြွက်များအားလုံးသည်၎င်းတို့၏ကနဦးခန္ဓာကိုယ်အလေးချိန်တဖြည်းဖြည်းတစုံတယောက်ကိုရက်သတ္တပတ်တစ်ကာလအတွင်း 90% အထိလျှော့ချခဲ့သည့်ကာလအတွင်းတစ်ဦးအပျော့စားအစာကိုကန့်သတ်ပါရာဒိုင်းအကြောင်းမဲ့ခဲ့ကြသည်။ အဆိုပါ ICV-cannulated ကြွက်များအတွက်သင်တန်းခွဲစိတ်ကုသပြီးနောက်တစ်ပတ်အတွင်းစတင်။ အော်ပရေတာ boxes များနေရာချထားမတိုင်မီကအဆိုပါကြွက်များကိုအနည်းဆုံးနှစျကွိမျအပေါ်အိမ်လှောင်အိမ်ပတ်ဝန်းကျင်အတွက် sucrose လုံးလေးများနှင့်ထိတွေ့ခဲ့သည်။ ထို့နောက်ကြွက်တစ်နေ့လျှင်နှစ်ခုအစည်းအဝေးများနှင့်အတူသတ်မှတ်ထားတဲ့အချိုး FR1 အချိန်ဇယားအောက်တွင် sucrose လုံးလေးများများအတွက်လီဗာစာနယ်ဇင်းမှသိခဲ့ရတယ်။ FR1 များတွင်တက်ကြွစွာလီဗာအပေါ်တစ်ခုတည်းစာနယ်ဇင်းတဦးတည်း sucrose တောင့်များ၏ပို့ဆောင်မှုအတွက်ရလဒ်။ အားလုံး FR အစည်းအဝေးများ 30 မိနစ်ကြာမြင့်ဒါမှမဟုတ်ကြွက်ပထမဦးဆုံးဖြစ်ပွားခဲ့သည်ကိုမဆို 100 လုံးလေးများ, ရရှိခဲ့သည်အထိပါပဲ။ အဆိုပါကြွက်များအများစုဟာအစည်းအဝေးများ 100 မှ 10 ပြီးနောက် session တစ်ခုသတ်မှတ်ထားလျင် 15 လုံးလေးများအောင်မြင်။ အဆိုပါလှုပ်ရှားလီဗာအပေါ်စာနယ်ဇင်းမှတ်တမ်းတင်ထားသောဒါပေမယ့်ဘယ်သူမျှမ Programs အကျိုးဆက်ခဲ့ခဲ့ကြသည်။ FR1 အချိန်ဇယားအစည်းအဝေးများ (အသီးသီးတောင့်နှုန်းဆိုလိုသည်မှာသုံးငါးပုံနှိပျ) FR3 နှင့် FR5 အားဖြင့်နောက်တော်သို့လိုက်ခဲ့သည်။ တဖန်တက်ကြွလီဗာအပေါ် session တစ်ခုနှုန်း 100 တုံ့ပြန်မှုတစ်ခုအနည်းဆုံးလာမယ့်အချိန်ဇယားကိုရန်တိုးဘို့လိုအပ်သဖြင့်, အဆိုပါကြွက်များအများစုကဒီအဆင့်ကိုအောင်မြင်ရန်တစ်ဦးတည်းသာနှစ်ခုမှ FR3 နှင့် FR5 အချိန်ဇယား (s) ကိုလိုအပ်သည်။ အဆိုပါ FR5 အချိန်ဇယားအကျိုးကို၏ကုန်ကျစရိတ်ကြွက်အကျိုးကိုရယူထဲသို့သွင်းထားရန်ဆန္ဒရှိသည်အလုပ်၏ပမာဏကိုဆုံးဖြတ်ရန်အလို့ငှာတစ်ဦးချင်းစီကိုအောက်ပါအကျိုးသည်တဖြည်းဖြည်းတိုးပွားလာသောစဉ်အတွင်းတိုးတက်သောအချိုး (PR စနစ်) အချိန်ဇယားအားဖြင့်နောက်တော်သို့လိုက်ခဲ့သည်။ 5, 0.2, 5, 1, 2, 4, 9, 12, 15, 20, 25 အောက်ပါစီးရီးမှတဆင့် 32 - တုံ့ပြန်မှုအချိုး = [40e (ပြုတ်ရည်အရေအတွက်ကို× 50)] အောက်ပါညီမျှခြင်းအရသိရသည်တိုးမြှင့်တုံ့ပြန်မှုလိုအပ်ချက် , 62, 77, 95, 118, 145, 178, 219, 268, 328 ။ ကြွက် 60 မိနစ်အတွင်းအကျိုးကိုဝင်ငွေရန်ပျက်ကွက်သောအခါထို PR စနစ် session ကိုအဆုံးသတ်ခဲ့သည်။ အဲဒီ session အဆုံးသတ်ရှေ့တော်၌ထိုချိုးအမှတ်နောက်ဆုံးပြီးစီးခဲ့အချိုးအဖြစ်သတ်မှတ်ခံခဲ့ရသည်။ session တစ်ခုနှုန်းရရှိခဲ့ပြီးအစားအစာလုံးလေးများ၏နံပါတ်သုံးနှစ်ဆက်တိုက်အစည်းအဝေးများထက်ပို 15% ကွာခြားခဲ့ပါဘူးသည့်အခါတုံ့ပြန်တည်ငြိမ်ထည့်သွင်းစဉ်းစားခဲ့ပါတယ်။ အများဆုံးကိစ္စများတွင်ငါးမှခုနစ်အစည်းအဝေးများအတွင်းတည်ငြိမ်တုံ့ပြန်။ PR စနစ်စမ်းသပ်မှုတဦးတည်း session တစ်ခု / နေ့ထွက်သယ်ဆောင်ခဲ့သည်။ လူအပေါင်းတို့သည်ကြွက်များကိုအဆုံးသတ်ဖို့အားလုံးကိုအစည်းအဝေးများအဘို့အခွင့်ပြုရန် 75 မိနစ်သည်အထိအော်ပရေတာသေတ္တာ၌ နေ. သော်လည်းအဆိုပါအစည်းအဝေးများ, ပျမ်းမျှအား, 120 မိနစ်ပေါ်တွင်ကြာခဲ့သည်။ အဆိုပါကြွက်များနောက်ပိုင်းတွင်တစ်ဦးတစ်နာရီအခမဲ့-နို့တိုက်ကျွေးမှု Chow စားသုံးမှုတိုင်းတာခြင်းနေရာဖြစ်သည်အိတ်များပြောင်းရွှေ့ခံခဲ့ရသည်။ သင်တန်းနှင့်ကြိုတင်စမ်းသပ်ဖို့၏အဆုံးမှာကြွက်တစ်ဦးမှပြန်လာသောခဲ့ကြသည် ကြော်ငြာ libitum အချိန်ဇယားကိုအစာကျွေး။
အဆိုပါကြွက်များအားလုံးသည် ghrelin ရန်စမ်းသပ်မှုများအတွက် intraperitoneal (အိုင်ပီ) သို့မဟုတ်အစောပိုင်း (ghrelin စမ်းသပ်မှုများအတွက်) အလင်းကိုသံသရာအတွက်နှောင်းပိုင်းအလင်းကိုသံသရာအတွက်ကြွက်များ၏သီးခြားအုပ်စုတတိယ ventricle (တတိယ ICV) ထိုးဆေးအတွက်လက်ခံရရှိမတိုင်မီစတင်မိနစ် 20 အော်ပရေတာစမ်းသပ်ခြင်း၏။ အားလုံးအခြေအနေများ (တစ်ဦးချင်းစီကြွက်သီးခြားစမ်းသပ်ခြင်းရက်ပေါင်းပေါ်မှာရှိသမျှသောအခြေအနေများလက်ခံရရှိ) တစ်ဦး counterbalanced ထုံးစံ၌ 48 နာရီနှင့်ပြေးတစ်ဦးနိမ့်ဆုံးအားဖြင့်ကွဲကွာခဲ့သည်။
စမ်းသပ်မှု 1: ကြွက်များတွင် sucrose များအတွက်တုံ့ပြန် PR စနစ် operating အပေါ်ရံသို့မဟုတ် Central ghrelin အုပ်ချုပ်ရေးသက်ရောက်မှု
လူအပေါင်းတို့သည်ကြွက်အဘို့, လီဗာ-နှိပ်တုံ့ပြန်မှုအခြေအနေနှစ်ခုအပြီးလေ့လာခဲ့ကြသည်: ဆားသို့မဟုတ် acylated ကြွက် ghrelin (Tocris, Bristol, ဗြိတိန်, 0.33 1 ml / ကီလိုဂရမ်မှာ / ကီလိုဂရမ်ကိုယ်အလေးချိန် mg) နဲ့အိုင်ပီကုသမှု။ ရွေးချယ်ထားသော IP ကို ​​ghrelin ထိုး (ကြွက်အတွက်နို့တိုက်ကျွေးရေးတုံ့ပြန်မှုသွေးဆောင်ယခင်ကပြသထားသည်Wren et al။ 2000) နှင့်လည်းကြွက်များတွင် accumbal dopamine လွှတ်ပေးရန်နှင့် locomotor လှုပ်ရှားမှုသွေးဆောင် (Jerlhag 2008) ။ အော်ပရေတာစမ်းသပ်ခြင်းမှနောက်ဆက်တွဲ, ထိုကြွက်များအခမဲ့သုံးစွဲနိုင် Chow ခွင့်ပြုခဲ့သည်များနှင့် Chow စားသုံးမှုတစ်ဦးတနာရီကြာကာလအတွင်းအပြီးတိုင်းတာခဲ့သည်။ ထိန်းချုပ်မှုအခွအေနေတတိယ ventricle ဆား, 0.5 μgတစ်ခုသို့မဟုတ် 1.0 μl volume ထဲမှာ acylated ကြွက် ghrelin (Tocris) ၏ 1 μgနှင့်အတူအောက်ပါအတိုင်းအဖြစ် ဆက်လက်. ကြွက်များ၏သီးခြားအုပ်စု, ငါတို့သုံးအခြေအနေများပြီးနောက်လျာထားသော CNS မူးယစ်ဆေးဖြန့်ဝေပြီးနောက်တုံ့ပြန်မှုဆန်းစစ်ခဲ့သည်။ ghrelin ၏ရှေးခယျြထားဆေးများသည်ယခင်က (နို့တိုက်ကျွေးရေးတုံ့ပြန်မှုထုတ်ယူနိုင်ရန်ပြသထားသည်Nakazato et al။ 2001) ။ အဆိုပါ ICV နှင့် IP ကို ​​ghrelin လေ့လာမှုများ, (အစားအစာစားသုံးမှုအတွက်အစားအစာများ၏အကြိုးဂုဏ်သတ္တိများထက် homeostatic drives တွေကိုမောင်းနှင်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်းသည့်အခါဆိုလိုသည်မှာ) လီဗာ-နှိပ်စမ်းသပ်ချက်ဟာ satiated ပြည်နယ်အတွက်ဖျော်ဖြေခဲ့ကြသည်နှစ်ဦးစလုံးသည်။ ဒါ့အပြင်အော်ပရေတာစမ်းသပ်ခြင်းမှနောက်ဆက်တွဲနှစ်ဦးစလုံးလေ့လာမှုများ, ၌, ကြွက် Chow အခမဲ့သုံးစွဲနိုင်ခွင့်ပြုခဲ့သည်များနှင့် Chow စားသုံးမှုတစ်ဦးတနာရီကြာကာလအတွင်းအပြီးတိုင်းတာခဲ့သည်။
စမ်းသပ်မှု 2: ကြွက်တစ် sucrose အကျိုးသည်မက်လုံးပေးလှုံ့ဆော်မှုအပေါ်တစ်ဦး ghrelin အဲဒီ receptor နှင့်အတူအရံသို့မဟုတ် Central ကုသမှုသက်ရောက်မှု (GHS-R1A) ရန် (JMV2959)
အောက်မှာဖေါ်ပြတဲ့အတိုင်း PR စနစ် operating တုံ့ပြန်မှုသုံးအခြေအနေများပြီးနောက်ဆန်းစစ်ခဲ့ကြသည်: ထိန်းချုပ်မှုအခွအေနေ IP ကိုဆားနှင့်အတူ, 1 / ကီလိုဂရမ်သို့မဟုတ်3မီလီဂရမ် JMV2959 ၏ / ကီလိုဂရမ် (AEZS-123, AeternaZentaris GmbH, Frankfurt, ဂျာမနီ) MG ။ အဆိုပါ JMV2959 ဆေးများအပေါ်အခြေခံပြီးရွေးချယ်ထားသည့်ခဲ့ကြသည် Jerlhag et al။ (2009) နှင့် Egecioglu et al။ (2010) နှင့်ယခင်က conditional ရာအရပျ preference ကိုအပြုအမူလျော့ကျပေမယ့် locomotor လှုပ်ရှားမှုတခုတခုအပေါ်မှာလွတ်လပ်သောအကျိုးသက်ရောက်မှုရှိသည်မဟုတ်ပြပဏာမဒေတာ။ အော်ပရေတာစမ်းသပ်ခြင်းမှနောက်ဆက်တွဲ, ထိုကြွက်များအခမဲ့သုံးစွဲနိုင် Chow ခွင့်ပြုပေးခဲ့သည်။ တတိယ ventricle ဆားဆေးထိုး,5μgတစ်ခုသို့မဟုတ် 10 μl volume ထဲမှာ JMV2959 ၏ 1 μgနှင့်အတူထိန်းချုပ်မှုခွအေနအေ: တိုက်ရိုက်စူးရှအလယ်ပိုင်းရန်လုပ်ဆောင်ချက်၏အကျိုးသက်ရောက်မှုများအကဲဖြတ်ရန်, ကြွက်များ၏သီးခြားအုပ်စု, Operations အပြုအမူကိုအောက်ပါသုံးခုအခြေအနေများပြီးနောက်ဆန်းစစ်ခဲ့သည်။ JMV2959 ထိုး၏ရှေးခယျြထား ICV ဆေးများအပေါ်အခြေခံပြီးခဲ့သည် ရှာလုံet al။ (2009a) 1 μg ghrelin အုပ်ချုပ်ခွင့် ICV ၏ orexigenic အရေးယူပိတ်ဆို့ခဲ့သည့်အတွက်။ အော်ပရေတာစမ်းသပ်ခြင်းမှနောက်ဆက်တွဲ, ထိုကြွက်များ Chow အခမဲ့သုံးစွဲနိုင်ခွင့်ပြုခဲ့သည်များနှင့် Chow စားသုံးမှုတစ်ဦးတနာရီကြာကာလအပြီးတွင်လည်းကနဦးဆေးထိုးပြီးနောက် 24 နာရီမှာတိုင်းတာခဲ့သည်။ ghrelin နှင့်အတူဖျော်ဖြေသူတို့အားဆနျ့ကငျြဘအတွက် GHS-R1A ရန်နှင့်အတူလေ့လာရေး, (အဆိုပါနှစ်ထက်လည်းစောသောကိုကြည့်ပါ), (endogenous ပျံ့နှံ့နေတဲ့ ghrelin ၏မြင့်မားစေရန်ကြိုတင်နိုင်ရန်အတွက်ထိုးဖို့ 16 နာရီအစားအစာကန့်သတ်ပြီးနောက်ကြွက်အပေါ်ဖျော်ဖြေခဲ့ကြCummings က et al။ 2001).
စမ်းသပ်မှု 3: အ VTA နှင့် NACC အတွက် dopamine- နှင့် acetylcholine-related မျိုးဗီဇ၏စကားရပ်ထဲမှာ ghrelin-သွေးဆောင်အပြောင်းအလဲများ
ဤတွင်နာတာရှည် ICV ghrelin ပြန့်ပွားမှု၏အကျိုးသက်ရောက်မှုကို dopaminergic နှင့် cholinergic transmission နှစ်ခုလုံးကိုအဓိက mesolimbic ဆုလာဘ်လမ်းကြောင်း node များဖြစ်သော VTA နှင့် NAcc ဟူသောစကားရပ်အပေါ်နှစ်ပတ်ကြာဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်။ ရှေးခယျြသော dopamine-related genes များသည် dopamine receptors (D1A, D2, D3, D5), catechol-O-methyltransferase, tyrosine hydroxylase (VTA အတွက်သာ) နှင့် monoamine oxidase အေ (encode encoding genes) တို့ဖြစ်သည်။ (α3α6, β2, β3) ။ ကျနော်တို့အကဲဖြတ်ရန်ရွေးချယ်သောမျိုးရိုးဗီဇသည်ယခင်က ghrelin ၏သက်ရောက်မှုများနှင့် / သို့မဟုတ်လှုံ့ဆော်ခြင်းနှင့်လှုံ့ဆော်ခြင်းဆိုင်ရာအပြုအမူအတွက်ပါဝင်ပတ်သက်ခဲ့သည်ကယ်လီ et al။ 2002; Figlewicz et al။ 2006; Jerlhag et al။ 2006, 2007; Sibilia et al။ 2006; Dalley et al။ 2007; Kuzmin et al။ 2009; Lee က et al။ 2009; Nimitvilai & Brodie 2010; Perello et al။ 2010) ။ တစ်ဦးကနာတာရှည် ghrelin / ဆားပြုတ်ရည် protocol ကိုဗီဇစကားရပ်တခုတခုအပေါ်မှာအကျိုးသက်ရောက်မှုကိုမြင်လျှင်၏အခွင့်အလမ်းတွေကိုတိုးမြှင့်နိုင်ရန်အတွက်စူးရှသောဆေးထိုးရန်ဦးစားပေးများတွင်အသုံးပြုခဲ့ပါသည်; ghrelin ကျော်နှင့်အဝလွန်ခြင်းမြှင့်တင်ရေရှည်အတွက်ဆုလာဘ်စနစ်၏အရေးပါသောထိန်းညှိသည်ဆိုပါကထိုမှတပါး, key ကိုဆုလာဘ်ယန္တရားများပြောင်းလဲပစ်ရန်၎င်း၏နာတာရှည်အကျိုးသက်ရောက်မှုများစဉ်းစားဆင်ခြင်စရာအရေးပါမှုဖြစ်ဖွယ်ရှိပါသည်။
အဆိုပါပြွန်နှင့် osmotic စုပ်စက် acetylated လူ့ ghrelin (နှင်းဆီ Pharma ဆေးဝါးထံမှလက်ဆောင်ကိုပင်ဟေဂင်, ဒိန်းမတ်) ဖြေရှင်းချက် (8.3 μg / ကြွက် / နေ့) သို့မဟုတ်ဆားမော်တော်ယာဉ်ဖြေရှင်းချက် (0.9% NaCl) နှင့်ပြည့်စုံသဖြင့်, ကုသမှု၏ဤဆေးထိုးခြင်းနှင့်အရှည်ယခင်က (ထို hypothalamus အတွက်မျိုးဗီဇစကားရပ်ကိုထိခိုက်ဖို့ပြပွဲခဲ့ရှာလုံet al။ 2009b) ။ အဆိုပါ minipumps ၏ implantation ပြီးနောက်တိုင်အောင်တဆယ်လေးရက်ပေါင်း, ထိုကြွက်များယင်းသို့ခေါင်းဖြတ်စီရင်ခြင်းဖြင့်သေဆုံးခဲ့သည်။ ဦးနှောက်လျှင်မြန်စွာဖယ်ရှားပြီးခဲ့ကြသည်နှင့် VTA နှင့် NACC တစ်ဦးနှောက် matrix ကိုသုံးပြီးခွဲဖြာခဲ့ကြ (တစ်ဦးချင်းစီဒေသနယ်စပ်အပေါ်အခြေခံပြီးဆုံးဖြတ်ပေးခဲ့သည် Paxinos & Watson 1986), အရည်နိုက်ထရိုဂျင်အတွက်အေးခဲခြင်းနှင့် mRNA စကားရပ်၏နောက်ပိုင်းတွင်ပြဌာန်းခွင့်တို့အတွက် -80 ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်မှာသိမ်းဆည်းထား။
RNA အထီးကျန်မှုတွေနဲ့ mRNA စကားရပ်
တစ် ဦး ချင်း ဦး နှောက်နမူနာများကို TissueLyzer (Qiagen) ကို အသုံးပြု၍ Qiazol (Qiagen, Hilden, Germany) တွင်တစ်သားတည်းဖြစ်အောင်ပြုလုပ်ခဲ့သည်။ စုစုပေါင်း RNA ကို RNeasy Lipid Tissue Mini Kit (Qiagen) သို့မဟုတ် RNeasy Micro Kit (Qiagen) သုံး၍ ထပ်မံ DNAse ကုသမှု (Qiagen) ဖြင့်ထုတ်ယူခဲ့သည်။ RNA အရည်အသွေးနှင့်အရေအတွက်ကို spectrophotometric တိုင်းတာမှုများ (Nanodrop 1000, NanoDrop Technologies, Wilmington, DE, USA) မှအကဲဖြတ်သည်။ ထုတ်လုပ်သူ၏ဖော်ပြချက်အရ cDNA ပေါင်းစပ်မှုအတွက်စုစုပေါင်း RNA ကိုကျပန်း hexamers (Applied Biosystems, Sundbyberg, Sweden) နှင့် Superscript III reverse transcriptase (Invitrogen Life Technologies, Paisley, UK) ကို အသုံးပြု၍ ကူးယူခဲ့သည်။ RNase-mediated degradation ကိုတားဆီးဖို့ Recombinant RNaseout Ribonuclease Inhibitor (Invitrogen) ကိုထည့်တယ်။ အားလုံး cDNA- တုံ့ပြန်မှုကိုသုံးထပ်ပြေးခဲ့ကြသည်။ အချိန်နှင့်တပြေးညီပြောင်းပြန်ကူးယူခြင်း PCR ကို TaqMan Custom Array assay သုံး၍ လုပ်ဆောင်ခဲ့သည်။ ၎င်းတို့ကို TaqMan စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုနှင့် Primary အစုံများဖြင့်ဒီဇိုင်းဆွဲထားပြီး On-line catalog (Applied Biosystems) မှရွေးချယ်ထားသောပစ်မှတ်မျိုးရိုးဗီဇအတွက်ဖြစ်သည်။ TaqMan Array ပလက်ဖောင်းများရှိဆိပ်ကမ်းတစ်ခုစီကို cDNA ပေါင်းစပ်ထားပြီး ၁၀၀ ng စုစုပေါင်း RNA နှင့် nuclease- free water နှင့် 100 μl TaqMan Gene Expression Master Mix (Applied Biosystems) ပေါင်း 50 mkl အထိသိုလှောင်ထားသည်။ TaqMan Arrays များကို 100HT system ကိုသုံးပြီး TaqMan Array Upgrade (Applied Biosystems) နဲ့အတူဆန်းစစ်ခဲ့သည်။ အပူရှိန်စက်ဘီးစီးခြင်းအခြေအနေများမှာ ၂ မိနစ် ၅၀ ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်၊ ၁၀ မိနစ် ၉၄.၅ ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်၊ နောက် ၃၀ စက္ကန့် ၃၀ တွင် ၉၇ ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်နှင့်တစ်မိနစ်လျှင် ၅၉.၇ ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်တို့ဖြစ်သည်။
မျိုးဗီဇစကားရပ်တန်ဖိုးΔΔအပေါ်အခြေခံပြီးတွက်ချက်ခဲ့ကြသည်Ct နည်းလမ်း (Livak & Schmittgen 2001), ဘယ်မှာဆား-ကုသအုပ်စုကစံကိုက်ညှိသတ်မှတ်ထားခဲ့သည်။ အတိုချုပ်, ΔCt (တံခါးခုံသံသရာကိုကိုယ်စားပြုတယ်Ct) ကိုရည်ညွှန်းဗီဇ၏အနုတ်ပစ်မှတ်မျိုးဗီဇနှင့်ΔΔCt အဆိုပါΔကိုယ်စားပြုတယ်Ct အဆိုပါစံကိုက်ညှိ၏အနုတ်အဆိုပါ ghrelin ကုသအုပ်စုတစ်စု၏။ ဆွေမျိုးပမာဏညီမျှခြင်းဆွေမျိုးအရေအတွက် =2သုံးပြီးဆုံးဖြတ်ပေးခဲ့သည်-ΔΔCt။ အဆိုပါစံကိုက်ညှိနမူနာအဘို့, ညီမျှခြင်းဆွေမျိုးအရေအတွက် =2ဖြစ်ပါသည်-0, 1 ဖြစ်သော; ထို့ကြောင့်သည်အခြားနမူနာဤဆွေမျိုးထုတ်ဖော်ပြောဆိုသည်။ Glyceraldehyde-3-ဖော့စဖိတ် dehydrogenase ရည်ညွှန်းဗီဇအဖြစ်အသုံးပြုခဲ့သည်။
အားလုံးအမူအကျင့် parameters တွေကိုအားဖြင့်နောက်တော်သို့လိုက်ကှဲလှဲ၏ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာအားဖြင့်သုံးသပ်ခဲ့ကြသည် post ကို hoc Tukey စမ်းသပ်မှုသို့မဟုတ် tသင့်လျော်သောအဖြစ် -tests ။ စာရင်းအင်းဆန်းစစ်ခြင်းများပြုလုပ်ထားခြင်း Statistica software ကို (Tulsa, OK ကို, USA) ကို အသုံးပြု. ကောက်ယူခဲ့ကြသည်။ မျိုးဗီဇစကားရပ်အပေါ်နာတာရှည်အလယ်ပိုင်း ghrelin ကုသမှု၏အကျိုးသက်ရောက်မှုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာရန်အလို့ငှာ, t-test အတူအသုံးပြုခဲ့သည် PအဆိုပါΔကို အသုံးပြု. တွက်ချက် -valuesCt-values ​​။ ကွာခြားချက်များမှာသိသာစဉ်းစားခဲ့ကြ P <0.05 ။ ဒေတာ SEM ±ယုတ်အဖြစ်ထုတ်ဖော်ပြောဆိုနေကြပါတယ်။
ဤတွင်ကျနော်တို့ကသဘာဝချိုမြိန်အစားအစာလှုံ့ဆျောမှုအတွက် ghrelin ၏အခန်းကဏ္ဍကိုအကဲဖြတ်ရန်စွဲသုတေသနအတွက်အသုံးပြုသွားမည်တစ်ပါရာဒိုင်း employ နှင့်သကြားဓာတ်ဂုဏ်သတ္တိများအားဖြည့်။ အထူးသ sucrose ဆုလာဘ်ထိရောက်မှုအပေါ်ရံ ghrelin အုပ်ချုပ်ရေး၏အခန်းကဏ္ဍကိုဆုံးဖြတ်ရန်, ငါတို့ 20 မိနစ်မော်တော်ယာဉ်သို့မဟုတ် ghrelin ၏ IP ကိုဆေးထိုးပြီးနောက်ကြွက်တစ်တိုးတက်သောတုံ့ပြန်မှုအချိန်ဇယားထဲမှာ sucrose Self-အုပ်ချုပ်ရေးဆန်းစစ်ခဲ့သည်။ အော်ပရေတာအပြုအမူအားလုံးသည်အတိုင်းအတာသိသိသာသာစူးရှသောအရံ ghrelin ဆေးထိုးပြီးနောက်ကြွက်များတွင်တိုးမြှင့်ခံခဲ့ရသည်: တက်ကြွလီဗာကိုနှိပ် (P အချိန်ကုန်ဆုံးသောကာလများအတွက် <0.05) ရရှိသောသကြားလုံးလေးများ (P အားလုံးအချိန်မှတ်များအတွက် <0.005) နှင့်မိနစ် 120 ချိုးမှတ် (P မော်တော်ယာဉ်နှင့် ghrelin များအတွက် <0.005, 32.53 ± 3.4 နှင့် 41 ± 4.3 အသီးသီး; သင်္ဘောသဖန်း။ 1a, ခ) ။ အဆိုပါစာပေသည်အဓိကအားဖြင့် ghrelin ၏ orexigenic အကျိုးသက်ရောက်မှုအတွက်အဓိကနေရာတစ်ခုဖြစ်သည်။ သို့သော် GHS-R1A သည် CNS ပြင်ပရှိအစားအစာစားခြင်းထိန်းချုပ်မှုနှင့်သက်ဆိုင်သည့်နေရာများတွင် vagus nerve တွင်ဖော်ပြသည်။ ထို့ကြောင့် IP ghrelin ၏လေ့လာတွေ့ရှိချက်များအရအရံပစ္စည်း receptors များကကမကထပြုခြင်းကိုဖယ်ထုတ်။ မရပါ။ သို့သော်ပမာဏအနည်းငယ်နှင့် Ghrelin ပမာဏကိုဗဟိုဆေးထိုးခြင်းသည် CNS GHS-R1A ကိုသာလှုံ့ဆော်ပေးသည်။ ထို့ကြောင့်, sucrose ဆုလာဘ်ထိရောက်မှုအပေါ် ghrelin ၏တိုက်ရိုက် CNS အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုဆုံးဖြတ်ရန်အလို့ငှာ, ငါတို့ယာဉ်သို့မဟုတ် ghrelin တတိယ ventricle ဆေးထိုးခြင်းဖြင့်လည်း operant ပါရာဒိုင်းမှမိနစ် 20 အုပ်ချုပ်ခဲ့သည့်အတွက်အပြိုင်လေ့လာမှုဖျော်ဖြေခဲ့ပါတယ်။ အကျိုးသက်ရောက်မှုအယူအဆ၏ဗဟိုနေရာနှင့်ကိုက်ညီမှုရှိခြင်း၊ ကြွက်များကို ICV ghrelin ထိုးခြင်း (0.5 µg နှင့် 1.0 µg ဆေးများ) သည်အထက်တွင်ဖော်ပြထားသော operant အပြုအမူများအားလုံးသိသိသာသာတိုးတက်လာခဲ့သည် (သင်္ဘောသဖန်း။ 2a, ခ) ။ အဆိုပါ ICV ghrelin လေ့လာမှုအတွက်တက်ကြွစွာလီဗာတုံ့ပြန်မှု၏အချိန်သင်တန်း [အကျိုးသက်ရောက်မှုဟာ 10- နှင့် 30 မိနစ်အချိန်မှတ်နေစဉ်အတွင်းဖြည်းဖြည်းပေါ်ထွက်လာစဉ်က 60 မိနစ်မှာအရေးပါမှုကိုရောက်ရှိကြောင်းတက်ကြွလီဗာထင်ရှား: 10 မိနစ် F(2, 24) = 0.94, P = 0.41, 30 မိနစ် F(2, 24) = 3.13, P = 0.06, 60 မိနစ် F(2, 24) = 5.86, P <0.01, မိနစ် 90 F(2, 24) = 6.42, P <0.01, မိနစ် 120 F(2, 24) = 6.03, P <0.01; ရရှိသောဆုများ: 10 မိနစ် F(2, 24) = 0.26, P = 0.78, 30 မိနစ် F(2, 24) = 2.76, P = 0.08, 60 မိနစ် F(2, 24) = 8.31, P <0.005, မိနစ် 90 F(2, 24) = 10.16, P <0.001, မိနစ် 120 F(2, 24) = 11.93, P <0.001; နှင့် break point F(2, 24) = 7.22, P <0.005 (17.31 ± 1.53, 33.15 ± 5.52, မော်တော်ယာဉ်များအတွက် 36 ± 6.95, အသီးသီး 0.5 μgနှင့် 1.0 μg ghrelin)] ဤလမ်းကြောင်းမှပို့ဆောင်သည့်အခါ ghrelin- သွေးဆောင်နို့တိုက်ကျွေးမှုအောင်းနေမှု၏အခြားအစီရင်ခံစာများနှင့်ကိုက်ညီအချိန်သင်တန်း (Faulconbridge et al။ 2003) ။ နှစ်ဦးစလုံးစမ်းသပ်ချက်မှာမလှုပ်မရှားလီဗာမှာလှုပ်ရှားမှုအသေးစားနှင့်ကွဲပြားခြားနားသောကုသမှုအုပ်စုများ (အသီးသီးအိုင်ပီ 4.1 ± 1.1, ယာဉ်နှင့် ghrelin များအတွက် 4.1 ± 1.1 အကြားသိသိသာသာကွာခြားဘဲ, ICV 3.9 ± 1.1, 2.1 ± 0.7, 3.5 ± 1.6 များအတွက် ကုသမှုလှုပ်ရှားမှုအတွင်း unspecific Non-ရည်မှန်းချက်ညွှန်ကြားအပြောင်းအလဲများကိုထုတ်လုပ်ရန်မဟုတ်ပါကြောင်းအကြံပြုအသီးသီးမော်တော်ယာဉ်, 0.5 μgနှင့် 1.0 μg ghrelin) ။ ထိုခဏခြင်းတွင်အော်ပရေတာစမ်းသပ်ပြီးနောက်, ကြွက် Chow ၎င်းတို့၏နေအိမ်အိတ်များနှင့်အခွင့်ပြုခဲ့အခမဲ့သုံးစွဲနိုင်ဖို့ပြန်ရောက်ကြသည် ဟူ. ၎င်း, အဆိုပါကြွက်များ (Peripheral ပေးထားဖြစ်စေ, ghrelin နှင့်အတူထိုးသွင်းP <0.05) သို့မဟုတ်ဗဟို [F(2, 24) = 12.64, P <0.001], မော်တော်ယာဉ်ကုသအုပ်စုများနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါကပထမ ဦး ဆုံးနာရီအတွင်း၎င်းတို့၏ chow စားသုံးမှုနှစ်ဆနီးပါး (သင်္ဘောသဖန်းသီး 1c & 2c) ။ ယခင်ဒေတာနဲ့အညီ (Faulconbridge et al။ 2003) စူးရှသောဗဟို ghrelin ဆေးထိုး၏ hyperphagic အကျိုးသက်ရောက်မှုအများစုသည်ဆေးထိုးပြီးနောက်သုံးနာရီအတွင်းရာအရပ်ကိုကြာ, Chow စားသုံးမှုအပေါ်အဘယ်သူမျှမသက်ရောက် ghrelin ၏တစ်ခုခုကိုထိုး၏ ICV အုပ်ချုပ်မှုအပြီးနာရီ 24 သုံးခုမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့လေ့လာမှုမှာမှတ်ချက်ချခဲ့ကွောငျးကိုညွှန်း [17.4 ± 1.12 အသီးသီး 18.42 ± 1.34, 19.12 ± 1.43 မော်တော်ယာဉ်, 0.5 μgနှင့် 1.0 μg ghrelin, F(2, 24) = 2.27, P = 0.13] ။
Peripheral ghrelin ဆေးထိုးတဲ့ PR စနစ်အချိုးအော်ပရေတာအေးစက်မော်ဒယ်အတွက်အရေးပါတယ်လို့အစားအစာရယူဖို့လှုံ့ဆျောမှုတိုးပွားစေပါသည်။ အဆိုပါတက်ကြွစွာလီဗာ (က) အပေါ်တုံ့ပြန်မှု၏နံပါတ်နှင့် 45 ၏နံပါတ် (ခ) ရရှိသော sucrose ဆုလာဘ်သိသိသာသာတိုးပွားလာကြသည် MG ...
CNS (တတိယ ICV) ghrelin ပေးပို့တစ် PR စနစ်အချိုးအော်ပရေတာအေးစက်မော်ဒယ်အတွက် sucrose ၏အကြိုးတန်ဖိုးကိုတိုးပွားစေပါသည်။ အဆိုပါတက်ကြွစွာလီဗာ (က) အပေါ်တုံ့ပြန်မှု၏နံပါတ်နှင့် 45 ၏နံပါတ် (ခ) ရရှိသော sucrose ဆုလာဘ်သိသိသာသာတတိယတိုးနေကြသည် MG ...
စမ်းသပ်မှု 2: ကြွက်များတွင် sucrose အကျိုးသည်မက်လုံးပေးလှုံ့ဆော်မှုအပေါ်တစ်ဦး ghrelin အဲဒီ receptor (GHS-R1A) ရန် (JMV2959) နဲ့အရံသို့မဟုတ် Central ကုသမှုသက်ရောက်မှု
Next ကိုကျနော်တို့ sucrose ဆုလာဘ်ထိရောက်မှုအပေါ် GHS-R1A ၏ pharmacological ပိတ်ဆို့ထားခြင်း၏အကျိုးသက်ရောက်မှုများစူးစမ်းလေ့လာခဲ့ပါတယ်။ မော်တော်ယာဉ်သို့မဟုတ် 20 ၏ IP ကိုဆေးထိုး / ကီလိုဂရမ် MG သို့မဟုတ် JMV1 ၏3မီလီဂရမ် / ကီလိုဂရမ်တစ် GHS ပြီးနောက်ထို့ကြောင့်တစ်တိုးတက်သောတုံ့ပြန်မှုအချိန်ဇယားထဲမှာ sucrose Self-အုပ်ချုပ်ရေး ghrelin 2959 မိနစ်ပျံ့နှံ့နေတဲ့ endogenous ၏မြင့်မားစေရန်နေ့ချင်းညချင်းအစားအသောက်-ကန့်သတ်ကြွက်များတွင်လေ့လာခဲ့သည် -R1A ရန်။ အော်ပရေတာအပြုအမူများ၏အစီအမံအားလုံးသိသိသာသာ JMV2959 ၏အရံဆေးထိုး [တက်ကြွလီဗာပြီးနောက်ကြွက်များတွင်လျော့နည်းသွားခဲ့ကြသည်: ငါးမိနစ် F(2, 24) = 11.53 P <0.0005, မိနစ် 120 F(2, 24) = 11.27, P <0.001; ရရှိသောဆုများ - ငါးမိနစ် F(2, 24) = 23.39 P <0.0005, မိနစ် 120 F(2, 24) = 9.26, P <0.001 နှင့် 120 မှာချိုးမှတ်: F(2, 24) = 5.98, P <0.01 (45.31 ± 6.45, 42.08 ± 5.80, မော်တော်ယာဉ်များအတွက် 30.0 ± 5.89, 1 မီလီဂရမ် / ကီလိုဂရမ်နှင့်3မီလီဂရမ် / ကီလိုဂရမ် JMV2959, အသီးသီး)] ။ post ကို hoc ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ (အဓိကအကျိုးသက်ရောက်မှု3mg / kg ဆေးထိုးခြင်းဖြင့်မောင်းနှင်ခဲ့ကွောငျးဖျောပွထားပါသင်္ဘောသဖန်း။ 3a, ခ) ။ sucrose ဆုလာဘ်ထိရောက်မှုအတွက်ဗဟို ghrelin အဲဒီ receptor ၏အခန်းကဏ္ဍကိုဆုံးဖြတ်ရန်, အလားတူလေ့လာမှုရသောမော်တော်ယာဉ်သို့မဟုတ် JMV2959 (5 μgသို့မဟုတ် 10 μg) တွင်ဖျော်ဖြေခဲ့အော်ပရေတာတိုင်းတာရှေ့တော်၌ထိုတတိယ ventricle 20 မိနစ်အုပ်ချုပ်ခဲ့သည်။ အော်ပရေတာအပြုအမူများ၏ဖျောပွအတိုင်းအတာအားလုံးသည်သိသိသာသာ (JMV2959 နှစ်ခုစလုံးဆေးများ၏စူးရှသောတတိယ ventricle ပြုတ်ရည်ပြီးနောက်ကြွက်များတွင်လျော့နည်းသွားခဲ့ကြသည်သင်္ဘောသဖန်း။ 4a, ခ) ။ အဆိုပါလေ့လာအကျိုးသက်ရောက်မှုအဖြစ်ချက်ချင်းခဲ့သည် post ကို hoc 10 မိနစ်: ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာစမ်းသပ်ကာလ [တက်ကြွလီဗာတစ်လျှောက်လုံးထိန်းသိမ်းခဲ့မှသာအော်ပရေတာအခန်းလှုပ်ရှားမှု 10 မိနစ်အကြာတွင်ကုသမှုအုပ်စုများအကြားသိသိသာသာကွဲပြားခြားနားမှုထင်ရှား F(2, 24) = 10.16, P <0.0005, မိနစ် 30 F(2, 24) = 11.48, P <0.0005, မိနစ် 60 F(2, 24) = 9.11, P <0.001, မိနစ် 90 F(2, 24) = 8.30, P <0.001, မိနစ် 120 F(2, 24) = 4.95, P <0.05; ရရှိသောဆုများ: 10 မိနစ် F(2, 24) = 21.23, P <0.0001, မိနစ် 30 F(2, 24) = 25.08, P <0.0001, မိနစ် 60 F(2, 24) = 19.24, P <0.0001, မိနစ် 90 F(2, 24) = 20.04, P <0.0001, မိနစ် 120 F(2, 24) = 5.44, P <0.01; နှင့် break point F(2, 24) = 3.78, P <0.05 (51.4 ± 8.58, 38.13 ± 5.07, 33.67 ± 5.21, မော်တော်ယာဉ်အတွက်5μgနှင့် 10 μg JMV2959, အသီးသီး)] ။
တစ်ဦး ghrelin အဲဒီ receptor ရန်, JMV2959 ၏ Peripheral ပေးပို့။ တစ်ဦး PR စနစ်အချိုးအော်ပရေတာအေးစက်မော်ဒယ်အတွက်အရေးပါတယ်လို့အစားအစာရယူဖို့လှုံ့ဆျောမှုလျော့နည်းစေပါသည်။ အဆိုပါတက်ကြွစွာလီဗာ (က) အပေါ်တုံ့ပြန်မှု၏နံပါတ်နှင့် 45 ၏နံပါတ်ရရှိသော sucrose ဆုလာဘ် MG ...
JMV1 နှင့်အတူ GHS-R2959A ဗဟိုပိတ်ဆို့နေတဲ့ PR စနစ်အချိုးအော်ပရေတာအေးစက်မော်ဒယ်အတွက်အစားအစာဆုလာဘ်ရရှိရန်ဖို့လှုံ့ဆျောမှုလျော့နည်းစေပါသည်။ တက်ကြွစွာလီဗာ (က) နှင့် 45 ၏နံပါတ်ပေါ်တုံ့ပြန်မှုအရေအတွက် (ခ) ရရှိသော sucrose ဆုလာဘ်သိသိသာသာလျော့နည်းသွားကြသည် MG ...
မျှော်လင့်ထားသည့်အတိုင်း (Hodos 1961; Jewett et al။ 1995), အိုင်ပီနဲ့ ICV အုပ်ချုပ်မှုလမ်းကြောင်းနှစ်ခုလုံးအပါအဝင်အားလုံးကုသမှုအုပ်စုများအတွက်, sucrose များအတွက် operating တုံ့ပြန်မှုအပေါ်အစားအသောက်ဆင်းရဲချို့တဲ့၏အကျိုးသက်ရောက်မှု (ထင်ရှားခဲ့သည်သင်္ဘောသဖန်းသီး 3a & 4a) နှင့် satiated ပြည်နယ်အတွက်လေ့လာတွေ့ရှိကြောင်းနှင့်အတူခြားနား (သင်္ဘောသဖန်းသီး 1a & 2a) ။ , ယာဉ်အဘို့အ 9.6 ICV 3.0 ± 6.8, 2.2 ± 5.6, 1.9 ± 1 ၏မလှုပ်မရှားလီဗာအပေါ် Activity ကိုမော်တော်ယာဉ်များအတွက် (အိုင်ပီ3± 2959, 6.4 ± 1.3, 4.6 ± 1.3 အသေးစားနှင့် 4.4 / ကီလိုဂရမ် MG သို့မဟုတ် 1.7 / ကီလိုဂရမ် JMV5 MG μgနှင့်အသီးသီး JMV10 ၏ 2959 μg) နှင့် Peripheral သို့မဟုတ်ဗဟိုအုပ်ချုပ်ခွင့်ရှိမရှိ, JMV2959 (ဒီလှုပ်ရှားမှုဟာကွဲပြားခြားနားသောကုသမှုအုပ်စုများအကြားသိသိသာသာကွာခြားဘူး) အဲဒီလှုပ်ရှားမှုအပေါ်မည်သည့်သိသာထင်ရှားသောသက်ရောက်မှုရှိသည်မဟုတ်ခဲ့ပေ။ အဆိုပါ ICV လေ့လာမှုအဘို့, ချက်ချင်းအော်ပရေတာစမ်းသပ်ပြီးနောက်, ကြွက်ဟာသူတို့ရဲ့နေအိမ်လှောင်အိမ်မှပြန်လာသောနှင့်အခမဲ့ဖြစ်သည် access ကို Chow ခွင့်ပြုခဲ့ကြသည် ဟူ. ၎င်း, စိတ်ဝင်စားစရာ Chow စားသုံးမှုအပေါ်မျှအကျိုးသက်ရောက်မှု (တစ်ခုခုကိုတ-နာရီမှာမှတ်ချက်ချခဲ့သည်သင်္ဘောသဖန်း။ 4c) သို့မဟုတ် 24 နာရီအချိန်အမှတ် (Data ပြမပါ) ။ ဤသည် ghrelin အချက်ပြသည့်ဆင်းရဲချို့တဲ့-သွေးဆောင်အစားအစာလှုံ့ဆော်မှုများအတွက်လိုအပ်နေချိန်မှာ, ကကြောင့်ဆင်းရဲချို့တဲ့ကာလအတွင်း activated သည်အခြားမလိုအပ်တဲ့ယန္တရားများ၏ဖွယ်ရှိ 16 နာရီအစားအသောက်ဆင်းရဲချို့တဲ့သဖြင့်သွေးဆောင်အခမဲ့နို့တိုက်ကျွေးရေးများအတွက်မရှိမဖြစ်မဟုတ်ကြောင်းကိုညွှန်ပြနိုင်ဘူး။ အခမဲ့နို့တိုက်ကျွေးရေးတိုင်းတာအားလုံးမူးယစ်ဆေးရာ 140 မိနစ် postinjection ယူ. ဒါကြောင့်ကျနော်တို့အကျိုးသက်ရောက်မှုမရှိခြင်းမူးယစ်ဆေးဝါးထဲကဆေးကြောဖို့တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းကြောင့်ကြောင်းဖယ်ထုတ်လို့မရပါဘူး။
ပစ္စုပ္ပန်လေ့လာမှုမှာကျနော်တို့ကိုလည်း dopamine- နှင့် acetylcholine-related ဗီဇပါဝင်ရွေးချယ်ထားသည့် dopamine receptors နှင့်အင်ဇိုင်းတွေ၏ဟူသောအသုံးအနှုနျးအပျေါနာတာရှည်အလယ်ပိုင်း ghrelin ကုသမှု၏သက်ရောက်မှုကိုဆန်းစစ်အသုံးပြုပုံ key ကို mesolimbic node များ, အ VTA နှင့် NACC အတွက် ghrelin အားဖြင့်ပြောင်းလဲနေကြသည်ရှိမရှိစူးစမ်း dopamine ထုတ်လုပ်မှုနှင့်ဇီဝြဖစ်အတွက်တစ်ဦးပါရာဒိုင်းအတွက်ရှိပြီးသား hypothalamus အတွက်မျိုးဗီဇစကားရပ်ထဲမှာ ghrelin ဆက်စပ်အပြောင်းအလဲများကိုထုတ်လုပ်ရန်တည်ထောင်ခဲ့သည် (ရှာလုံet al။ 2009b) ။ အဆိုပါ VTA dopamine အဲဒီ receptor ခုနှစ်တွင် D5 နှင့်နီကိုတင်း acetylcholine အဲဒီ receptor (nAChRβ2) ကိုဆား-ကုသအုပ်စုတစ်စုနှင့်အတူနှိုင်းယှဉ် ghrelin-ကုသကြွက်များတွင်တစ်ခုတိုးချဲ့ mRNA စကားရပ်ခဲ့ (သင်္ဘောသဖန်း။ 5a) ။ အဆိုပါ NACC ခုနှစ်, ဆား-ကုသအုပ်စုတစ်စုနှင့်အတူနှိုင်းယှဉ် ghrelin-ကုသကြွက်များတွင် dopamine receptors D1A, D3 နှင့် D5 နှင့်လည်းနီကိုတင်း acetylcholine အဲဒီ receptor nAChRα3ကုဒ်သွင်းသည့်မျိုးဗီဇတစ်ခုလျော့နည်းသွား mRNA စကားရပ် (ရှိခဲ့သင်္ဘောသဖန်း။ 5b).
နာတာရှည် ICV ghrelin သို့မဟုတ်မော်တော်ယာဉ်ကုသမှုပြီးနောက် VTA (က) နှင့် NACC (ခ) တွင်မျိုးဗီဇစကားရပ်ဆက်စပ် Dopamine နှင့် acetylcholine ။ ဒေတာကိုဆားကုသမှုခွံပြောင်းလဲမှုဆွေမျိုးများ၏ယုတ်ကိုကိုယ်စားပြုသည်။ D1, dopamine D1 အဲဒီ receptor; D2 dopamine D2 အဲဒီ receptor; D3, dopamine ...
ဤတွင်ကျနော်တို့မက်လုံးပေးလှုံ့ဆော်မှုများ၏မော်ဂျူအတွက်ဗဟို ghrelin အချက်ပြစနစ်တစ်အခန်းကဏ္ဍထုတ်ဖေါ်နှင့် sucrose ဆုလာဘ်၏ဂုဏ်သတ္တိများအားဖြည့်ခြင်းနှင့် dopaminergic နှင့်အဓိက mesolimbic ဆုလာဘ် node များအတွက် cholinergic receptors ၏မျိုးဗီဇစကားရပ်အပေါ်နာတာရှည်အလယ်ပိုင်း ghrelin ကုသမှုတစ်ခုသက်ရောက်မှုဖော်ပြသည်။ ရလဒ် ghrelin နှစ်ခုစလုံးအလယ်ပိုင်းနှင့်အရံပေးပို့သိသိသာသာတိရစ္ဆာန် sucrose ဆုလာဘ်ရရှိရန်လုပ်ဖို့ဆန္ဒရှိသည်အလုပ်၏ပမာဏကိုတိုးပွါးကြောင်းဆန္ဒပြခဲ့ကြသည်။ ထို့ပြင် ghrelin အဲဒီ receptor ၏စနစ်တကျသို့မဟုတ် Central ပိတ်ဆို့ sucrose များအတွက်တုံ့ပြန် operating နှိမ်နင်း။ ထို့ကြောင့်ကျနော်တို့ endogenous ghrelin အချက်ပြတဲ့ sucrose ဆုလာဘ်များအတွက်မက်လုံးပေးလှုံ့ဆော်မှုများအတွက်အရေးပါမှုကြောင်းအခြလိမ့်မည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏တွေ့ရှိချက်ဗဟို ghrelin အချက်ပြစနစ်၏အရေးပါသောအခန်းကဏ္ဍကိုအစားအစာအပါအဝင်ဆုလာဘ်၏မက်လုံးပေးတန်ဖိုးကိုတိုးမြှင့်ဖို့သောအယူအဆနှင့်အညီ၌ရှိကြ၏။ အစားအစာကိုကန့်သတ် sucrose ၏အကြိုးတန်ဖိုးကိုတိုးပွါးကြောင်းပေးထားသော (Hodos 1961; Jewett et al။ 1995) နှင့် ghrelin အဆင့်ဆင့် (ရေတိုရေရှည်အစားအစာကန့်သတ်နေစဉ်အတွင်းတိုးမြှင်ဖြစ်ကြောင်းGualillo et al။ 2002), ဒါကြောင့်အစာကိုကန့်သတ် / ဆင်းရဲချို့တဲ့တဲ့ပြည်နယ်အတွင်းမှာ ghrelin အစားအစာ / အစားအစာလှုံ့ဆျောမှု၏အကြိုးတန်ဖိုးကိုတိုးပွါးကြောင်းပံ့ပိုးအချက်များတစ်ခုဖြစ်သည်တာဖြစ်နိုင်တယ်။ အမှန်စင်စစ်ရံ ghrelin ထိတွေ့အစားအစာ-ဆုံးရှုံးကြွက်များတွင်လေ့လာတွေ့ရှိသူတို့အားအလားတူအဆင့်ဆင့်မှအော်ပရေတာအပြုအမူတိုးမြှင့်ခြင်း, အပြန်အလှန်, ghrelin အချက်ပြ၏ပိတ်ဆို့ non-ဆုံးရှုံးကြွက်များတွင်မှတ်ချက်ပြုအဆင့်အော်ပရေတာအပြုအမူလျော့နည်းသွားသည်။
ဒါဟာယခုပြဿနာတိုးလာအစားအစာစားသုံးမှုဖွယ်ရှိ hedonic နှင့်စိတ်ခွန်အားနိုးနှစ်ဦးစလုံးရှုထောင့်နဲ့ပတ်သက်တဲ့, အစားအစာဆုလာဘ်၏ဗဟိုယန္တရားများတစ် dysregulation ထင်ဟပ်ကြောင်းရှင်းရှင်းလင်းလင်းပုံရသည်။ အဖြစ်အခမဲ့နို့တိုက်ကျွေးခြင်းနှင့်ဆုလာဘ်-လှုံ့ဆော်မှုနို့တိုက်ကျွေးရေး (differential ကို neuroanatomical အလွှာကိုထိန်းချုပ်နှစ်ခုသီးခြားစီဖြစ်ရပ်ဖြစ်ပေါ်လာSalamone et al။ 1991အစာကျွေးခြင်းအပြုအမူတွင်ပါဝင်သောအေးဂျင့်များ၏အခန်းကဏ္assessကိုအကဲဖြတ်သည့်အခါနှစ် ဦး စလုံးစစ်ဆေးရန်အရေးကြီးသည်။ Ghrelin ၏အစွမ်းထက် orexigenic သက်ရောက်မှုများကိုအခမဲ့နို့တိုက်ကျွေးရေးလက်လှမ်းမီမှုပုံစံများတွင်အဓိကအားဖြင့်လေ့လာခဲ့ပြီး၎င်းသည်အာဟာရများပြန်လည်ရရှိရေးနှင့်အကျိုးဖြစ်ထွန်းစေသောနို့တိုက်ကျွေးမှုနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်၎င်းင်း၏အခန်းကဏ္betweenကိုခွဲခြားရန်ခက်ခဲလိမ့်မည်။ ပစ္စုပ္ပန်လေ့လာမှုမှာငါတို့ GHS-R1A ligands သည်မူးယစ်ဆေးဝါးအလွဲသုံးစားမှု၏လိုလားခြင်းနှင့်လှုံ့ဆော်မှုကိုပြသရန်အခြားအခင်းအကျင်းများတွင်အသုံးပြုခဲ့သည့်စမ်းသပ်မှုပုံစံကို အသုံးပြု၍ sucrose ဆုကိုရရှိရန်လှုံ့ဆော်မှုကိုဝင်ရောက်စွက်ဖက်ကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့သည်။ လှုံ့ဆော်မှုရှိသောအပြုအမူများတိုးလာခြင်းသည်ဓာတုဆေးစွဲခြင်းနှင့်ကယ်လိုရီကန့်သတ်ခြင်းနှစ်ခုလုံးအတွက်ဖြစ်လေ့ဖြစ်ထရှိပြီး၊ ပစ္စုပ္ပန်လေ့လာမှုမှာကျနော်တို့ကိုလည်း operant ခန်းထဲမှာအစားအစာများအတွက်သိသိသာသာပိုပြီးအလုပ်ဖြုန်းသောတူညီသောတိရိစ္ဆာန်များအတွက်ပုံမှန် chow အစားအစာအခမဲ့အစာကျွေးခြင်းတစ် ghrelin- သွေးဆောင်တိုးတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ ထို့ကြောင့်အခမဲ့ကျွေးမွေးခြင်းပုံစံများတွင် ghrelin အကျိုးသက်ရောက်မှုများနှင့် ပတ်သက်၍ အစောပိုင်းအစီရင်ခံစာများနှင့်အတူကျွန်ုပ်တို့၏အချက်အလက်Wren et al။ 2000), ghrelin အခမဲ့နို့တိုက်ကျွေးရေးအဖြစ်နို့တိုက်ကျွေးရေးလှုံ့ဆျောမှုနှစ်ခုလုံး modulate နိုင်စွမ်းရှိကြောင်းဖော်ပြသည်။
အဆိုပါ ghrelin အဲဒီ receptor GHS-R1A စွမ်းအင်ချိန်ခွင်လျှာနှင့်ဆုလာဘ်တွင်ပါဝင်ပတ်သက် key ကို hypothalamic, hindbrain နှင့် mesolimbic ဒေသများ (များတွင်လက်ရှိကြောင်းပေးထားZigman et al။ 2006) နှင့် GHS-R1A ၏ဗဟို ventricular ဆေးထိုး, ဤ CNS ဒေသများဖွယ်ရှိအမြတ်ကျယ်ပြန့်သုံးစွဲနိုင် ligands, ဒီမှာပြသ ghrelin ၏ sucrose ဆုလာဘ်လှုံ့ဆျောမှုအကျိုးသက်ရောက်မှုများအတွက်အများအပြားသည်သက်ဆိုင်ရာ neuroanatomical အလွှာရှိနိုင်တယ်လို့။ ဒါဟာ (ghrelin VTA dopamine အာရုံခံမြှင့်လုပ်ဆောင်အဖြစ် ghrelin key ကို mesolimbic ဒေသများအပေါ်တိုက်ရိုက်ပြုမူကြောင်းဖွယ်ရှိပုံရသည်Abizaid et al။ 2006အဆိုပါ VTA တိုး accumbal dopamine လွှတ်ပေးရန်မှ ghrelin ၏) နှင့်တိုက်ရိုက်အုပ်ချုပ်မှု (Jerlhag et al။ 2007) ။ ဤတသမတ်တည်းကျနော်တို့ယခင်ကအခမဲ့ရွေးချယ်မှုနို့တိုက်ကျွေးရေး Paradigm အတွက်အကျိုး / အရေးပါတယ်လို့အစားအစာစားသုံးမှုတိုးမြှင့်ခြင်းနှင့်လည်းအရေးပါတယ်လို့အစားအစာ၏ VTA တုံး ghrelin-သွေးဆောင်ရေနံဓါတ်ငွေ့ရှာဖွေရေးအပြုအမူကိုတွေ့ရှိရပါသည်ဖို့အချင်းချင်းအပြန်အလှန် VTA ghrelin ၏သက်ရောက်မှုအစီရင်ခံခဲ့ကြ (Egecioglu et al။ 2010) ။ အဆိုပါ NACC လည်းအစားအစာစားသုံးမှု၏စိတ်ခွန်အားနိုးရှုထောင့်ပြောင်းလဲပစ်အတွက် ghrelin များအတွက်တိုက်ရိုက်ပစ်မှတ်ဖြစ်မည်အကြောင်း, တိုက်ရိုက်ဒီဧရိယာသို့ထိုးသွင်းသောအခါ, ghrelin (ကနို့တိုက်ကျွေးရေးတုံ့ပြန်မှု inducesနေးလီး et al။ 2005), ကြွက်၌ဤဧရိယာ၌ GHS-R1A ၏ရှေ့မှောက်တွင်သည်အခြားစုံစမ်းစစ်ဆေးခြင်းဖြင့်ဖော်ပြထားမခံခဲ့ရပေမယ့် (Zigman et al။ 2006) နှင့်ဤအရပ်မှနောက်ထပ်ရှင်းလင်းချက်လိုအပ်သည်။
တသမတ်တည်း, လှုံ့ဆော်မှုအပြုအမူတွေအတွက်၎င်း၏မရှိမဖြစ်အခန်းကဏ္ဍနှင့်တကွ, dopamine သည့်စနစ်အတွင်းအများအပြားဗီဇအလယ်ပိုင်း ghrelin ကုသမှုအားဖြင့်ပြောင်းလဲခဲ့ကြသည်။ ဤရွေ့ကားဒေတာ dopamine အဲဒီ receptor စကားရပ်၏စည်းမျဉ်းအကျိုးကို-related function ကိုများနှင့်အချက်ပြအပေါ်ထားတဲ့မှတဆင့် ghrelin သက်ရောက်မှုရေရှည်ယန္တရားကြောင်းဖြစ်နိုင်ခြေမြှင့်။ dopamine receptors ၏အကဲဖြတ် (ဘာလို့လဲဆိုတော့ dendritic dopamine လွှတ်ပေးရေးကဲ့သို့သောပု NACC အဖြစ်ဖြန့်ချိ၏ site မှာဒါပေမယ့်လည်း VTA ထဲမှာမသာအရေးကြီးပါသည်Cragg & Greenfield 1997), အဲဒါကိုလှုံ့ဆော်မှုအပြုအမူတွေကိုဆုချသြဇာလွှမ်းမိုးဖို့ဒေသအလိုက်ပြုမူသည်ဟုယူဆရသည်။ ဤတွင်ကျနော်တို့ ghrelin ကုသမှုပြီးနောက် VTA အတွက် D5 တစ်ခုတိုးလာစကားရပ်တွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ Dopamine D5 receptors (dopaminergic VTA အာရုံခံ၏ဆဲလ်အသေကောင်အပေါ်ပစ္စုပ္ပန်များမှာCiliax et al။ 2000) နှင့်၎င်းတို့၏လှုပ်ရှားမှု desensitization တဲ့ကာလပြီးနောက် VTA dopamine အာရုံခံဆဲလျလှုပ်ရှားမှု restore လိုအပ်သည် (Nimitvilai & Brodie 2010) ။ အဆိုပါ NACC တှငျကြှနျုပျတို့ D1 တစ်လျော့နည်းသွားစကားရပ်မှတ်ချက်ချသည်။ တကယ်တော့ဒီအဲဒီ receptor ၏လျှော့ချစကားရပ်မကြာသေးမီက (အဝလွန်ခြင်းနှင့် overconsumption အတွက် NACC အတွက်၎င်း၏အလားအလာအခန်းကဏ္ဍညွှန်းမြင့်မားတဲ့အဆီဓာတ်စာအပေါ်အဝလွန်ခြင်း-ခံနိုင်ရည်ကြွက်အဝလွန်ခြင်းကျရောက်နေတဲ့၏ NACC မှာပြသော်လည်းမထားသည်Alsio et al။ 2010) ။ ဒါ့အပြင် D3 ကုဒ်သွင်းဗီဇ၏ဟူသောအသုံးအနှုနျး ghrelin လျှော့ချခဲ့သည်, ထိုနှစ်မျိုးလုံးကြွက်များတွင် D2 / D3 receptors ၏လျော့နည်းသွားရရှိနိုင်မှုနှင့်လူ့မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲသူများပေးထားသောအထူးစိတျဝငျစားတဲ့တွေ့ရှိချက် (တိုးလာ Impulse နှင့်ဆက်နွယ်နေပါသည်Dalley et al။ 2007; Lee က et al။ 2009) ။ စိတ်ဝင်စားစရာကျနော်တို့ dopamine ပေါင်းစပ်သို့မဟုတ်ထုတ်လုပ်မှုတွင်ပါဝင်ပတ်သက်သည့်အင်ဇိုင်းတွေအတွက်မဆိုသိသာထင်ရှားသောအပြောင်းအလဲများကိုမမြင်နိုင်ခဲ့ပေ။
မူးယစ်ဆေးဝါးနှင့်အစားအစာဆုလာဘ်များအတွက် acetylcholine စနစ်၏အရေးကြီးသောအခန်းကဏ္ဍကောင်းစွာမှတ်တမ်းတင်လျက်ရှိ၏ ဒီနေရာမှာကျနော်တို့ ghrelin ကုသမှုအလားအလာဆုလာဘ် function ကိုပြောင်းလဲပစ်နိုင်သည့် ghrelin အားဖြင့်အခြားလမ်းကြောင်းများကိုအများအပြား acetylcholine နီကိုတင်း receptors subunits ကုဒ်သွင်းဗီဇ၏စကားရပ်ပြောင်းလဲမှုများနှင့်အတူဆက်နွယ်ခဲ့ကွောငျးဖျောပွပါ။ Ghrelin အဆိုပါ laterodorsal tegmental ဧရိယာ (LDTg), အ VTA dopamine စနစ်တစ် cholinergic အနာဂတ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အရက်အကျိုးသည်အရေးကြီးသောအရာ GHS-R1A, ကြွယ်ဝဧရိယာအတွင်းရှိ cholinergic အာရုံခံအပေါ်အရေးယူဆောင်ရွက်မှုကနေတဆင့်သွယ်ဝိုက် VTA dopaminergic အာရုံခံထိန်းညှိပေးနိုင်သည်။ တကယ်တော့အရင်ကကျနော်တို့ (ကြွက်များတွင် LDTg သို့နှစ်နိုင်ငံ ghrelin ဆေးထိုးတဲ့ cholinergic-မှီခိုထုံးစံ၌ dopamine လွှတ်ပေးရန်လှုံ့ဆော်ကြောင်းပြသJerlhag et al။ 2007, 2008) နှင့်အခမဲ့ရွေးချယ်မှု (အရက် / ရေ) အရက်သောက်ပါရာဒိုင်းအတွက်အရက်၏စားသုံးမှုတိုးပွါး (Jerlhag et al။ 2009) ။ အမှန်စင်စစ်မကြာသေးခင်ကလေ့လာမှုများ (အစားအစာဆုလာဘ်အတွက် cholinergic-dopamineric ဆုလာဘ် link ကိုပတ်သက်သည်ဟုယူဆရပါပြီDickson et al။ 2010) ။ နောက်ထပ်စိတ်ဝင်စားဖို့ဖြစ်နိုင်ခြေ ghrelin cholinergic receptors ၏ upregulation မှတဆင့် VTA အတွက်အချက်ပြ cholinergic မြှင့်တင်ရန်နိုငျသောကွောငျ့ဖွစျသညျ။ အမှန်စင်စစ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့လက်ရှိဗီဇစကားရပ်ဒေတာ VTA nAChRβ2 mRNA အဆင့်ဆင့်ဟာ ghrelin-ကုသကြွက်များတွင်တိုးမြှင့်ခဲ့ကြသကဲ့သို့ယန္တရားကိုထောကျပံ့ဖို့ပုံရသည်။
အဆိုပါ NACC အတွက် NACC cholinergic အာရုံခံခြင်းနှင့် acetylcholine ရဲ့လုပ်ဆောင်ချက်, အခြားတစ်ဖက်တွင်, (ဆုလာဘ်-oriented အပြုအမူတိုးမြှင့်အတွက် acetylcholine တစ်အခန်းကဏ္ဍညွှန်ပြအချို့အစီရင်ခံစာများနှင့်အတူပိုပြီးအငြင်းပွားစရာဖြစ်ရပြီPratt & ကယ်လီ 2005; Pratt & Blackstone 2009) ဒါပေမယ့် NACC အတွက် ACH နို့တိုက်ကျွေးရေးတားစီးနှင့်မွတ်မပြေနိုင်သောယန္တရားအတွက်အခန်းကဏ္ဍမှပြုမူစေခြင်းငှါညွှန်ပြအခြားသူတွေ (သံခမောက် et al။ 2003; Hoebel et al။ 2007) ။ အမှန်မှာကျွန်ုပ်တို့၏ရလာဒ်များသည် ghrelin ကုသမှုသည်နီကိုတီနီယမ်ဓာတ်ပေါင်းဖို subunits တစ်ခုဖြစ်သည့်nAChRα3၏ဖော်ပြချက်လျော့နည်းသွားခြင်းနှင့်ဆက်စပ်လျက်ရှိသောကြောင့်ရလဒ်များသည်အဆုံးစွန်နှင့်ကိုက်ညီပုံရသည်။ grelin ၏အောက်ခြေရှိရည်မှန်းချက်များကိုညွှန်ပြရာတွင်အလွန်အဖိုးတန်သော်လည်းမျိုးရိုးဗီဇဆိုင်ရာလေ့လာမှုလေ့လာမှုများသည် orexigenic- / ဆုလာဘ် -oriented response ကိုဖော်ပြရန်အတွက်လိုအပ်သောဆက်နွယ်မှု (upregulation or downregulation) ကိုသာအကြံပြုသည်ကိုသတိပြုပါ။ ကအစားထိုးအပြောင်းအလဲများအနေဖြင့်တိုက်ရိုက် dissociate ရန်ခက်ခဲပါလိမ့်မယ်အဖြစ်။ ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့၏မျိုးရိုးဗီဇဆိုင်ရာလေ့လာမှုလေ့လာမှုများသည်ဆက်စပ်မှုတစ်ခုနှင့်အနာဂတ်နှင့်သက်ဆိုင်သည့်အနာဂါတ်မျိုးရိုးဗီဇနှင့်ဆေးဝါးဗေဒဆိုင်ရာလေ့လာမှုများအတွက် ghrelin ၏အခမဲ့နှင့်ဆုလာဘ်လှုံ့ဆော်မှုရှိသောနို့တိုက်ကျွေးမှုအပေါ်အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိသည့်ဗီဇ၏အခန်းကဏ္determiningကိုဖော်ပြပေးသည်။
hypothalamic နှင့် brainstem ဒေသများအများဆုံးဖွယ်ရှိ homeostatic နို့တိုက်ကျွေးရေးကိုအထောက်အကူဖြစ်စေပေမယ့်, ငါတို့ ghrelin-သွေးဆောင်အစားအစာဆုလာဘ်လှုံ့ဆျောမှုအတွက် hypothalamic နှင့် / သို့မဟုတ် brainstem afferent စနစ်များများအတွက်သွယ်ဝိုက်အခန်းကဏ္ဍဖယ်ထုတ်လို့မရပါဘူး။ အမှန်မှာထို orexinergic အာရုံခံဟာနှစ်ဦးနှစ်ဖက် hypothalamus ထံမှ VTA နှင့် NACC (အပါအဝင် mesolimbic ဆုလာဘ် circuitry မှပရောဂျက်Toshinai et al။ 2003; Harris က et al။ 2005; Perello et al။ 2010) ။ အဆိုပါ arcuate နျူကလိယ၏ neuropeptide Y ကို (NPY) / AgRP အာရုံခံ, GHS-R1A ligands များအတွက်အခြားပစ်မှတ် (Dickson & Luckman 1997; စိတ်အားထက်သန် -Rhinehart & Bart 2007a,b), ထို့အပြင်အရေးပါသောအခန်းကဏ္ဍမှဖြစ်နိုင်သည်။ NPY (ဆုလာဘ် Chow ၏ထိရောက်မှုအဖြစ် sucrose တိုးမြှင့်ပြသခဲ့ပြီးဘရောင်း, ဖလက်ချာ & Coscina 1998), AgRP သာမြင့်သောအဆီအစားအစာ၏ဆုလာဘ်ထိရောက်မှုတိုးမြှင့်ဖို့ပုံပေါ်သော်လည်း (Tracy et al။ 2008) ။ Ghrelin (နှစ်ဦးစလုံး sucrose ဆုလာဘ် (ပစ္စုပ္ပန်လေ့လာမှု) တွင် high-အဆီဆုလာဘ်တစ်ခုအခန်းကဏ္ဍရှိသည်ဖို့ပေါ်လာသောPerello et al။ 2010); သို့သော် ghrelin ဤသက်ရောက်မှုများအတွက် NPY / AgRP အာရုံခံ၏ဆွေမျိုးအရေးပါမှု elucidated ခံရဖို့နေဆဲဖြစ်သည်။ အကျဉ်းချုပ်ထဲမှာ, ghrelin အာဟာရအစိတ်အပိုင်းများကိုဖြတ်ပြီး spanning အစားအစာစိတ်ခွန်အားနိုးဂုဏ်သတ္တိများရှိပြီးအများဆုံးဖွယ်ရှိနို့တိုက်ကျွေးရေးမြှင့်တင်ရန်ညှိနှိုင်းအပြုအမူတုံ့ပြန်မှုတွေကိုတပြိုင်တည်းအလုပ်လုပ်မှအများအပြားဟာဦးနှောက်ဧရိယာများသာသက်ရောက်သည်။
ဦးနှောက်သို့ ghrelin သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးကန့်သတ်ထားပေမဲ့ (ဘဏ်များ et al။ 2002), အရံ ghrelin ထိုကဲ့သို့သော hippocampus အဖြစ်ဒေသများရယူပစ်မှတ်ထားပုံပေါ် (Diano et al။ 2006) နှင့် VTA (Jerlhag 2008) ။ ghrelin ၏ဗဟိုသက်ရောက်မှုများအတွက်သွယ်ဝိုက်လမ်းကြောင်းအဖြစ် vagus အာရုံကြောနှင့်ဆက်စပ်မှုနှင့် ပတ်သက်၍ ငြင်းခုံမှုအချို့ရှိနေသေးသော်လည်း (Dornonville de la Cour et al။ 2005; နေ့စှဲ et al။ 2002; အာနိုး et al။ 2006အစားအစာစားသုံးမှုအပေါ်ရံ ghrelin ၏သက်ရောက်မှု ghrelin ရန်၏အချင်းချင်းအပြန်အလှန် VTA အုပ်ချုပ်မှုအားဖြင့်နှိမ်နင်းနိုင်ပါတယ်အဖြစ်), ပု CNS အတွင်းတိုက်ရိုက်အရေးယူ (ဖွယ်ရှိပုံရသည်Abizaid et al။ 2006) ။ Ghrelin ဦးနှောက်အတွင်းထုတ်လုပ်နေသည် (Cowley et al။ 2003), ဒါကြောင့်ဒီစည်းမျဉ်းသတ်မှတ်မည်သို့ဆုံးဖြတ်သည်နှင့်ဦးနှောက်-ဆင်းသက်လာ ghrelin အစားအစာစားသုံးမှုအဘို့နှင့်အစာစားရန်လှုံ့ဆော်မှုများအတွက်အရေးပါသောဗဟိုထုတ်လုပ်ပြီး signal ကိုထောက်ပံ့ခြင်းရှိမရှိခံရဖို့ဖြစ်နေဆဲပေမယ့်။ ((ဆိုလိုသည်မှာ ghrelin ligand ၏မရှိခြင်းအတွက်လှုပ်ရှားမှုရှိပါတယ်) ကို ghrelin အဲဒီ receptor GHS-R1A ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေတက်ကြွဖြစ်ပါတယ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုအတူခေါ်ဆောင်သွားHolst et al။ 2003), မေးခွန်းပျံ့နှံ့နေတဲ့ ghrelin အစားအစာအကျိုးသည်မက်လုံးပေးလှုံ့ဆော်မှုများအတွက်ဇီဝကမ္မသက်ဆိုင်ရာအူ-ဦးနှောက် signal ကိုထောက်ပံ့ခြင်းရှိမရှိအဖြစ်ပေါ်ပေါက်။ sucrose ဆုလာဘ်အလုပ်အပေါ်အလားတူသက်ရောက်မှုဖေါ်ပြခြင်းပစ္စုပ္ပန်လေ့လာမှု၏ရလဒ်များကို, GHS-R1A ligands ၏အလယ်ပိုင်းနှင့်အရံအုပ်ချုပ်မှုကနေတဆင့်ရယူနိုင်ပါတယ်နှစ်ဦးစလုံးဗဟိုဖြန့်ချိအဖြစ် Peripheral ဖြန့်ချိ ghrelin အလားအလာအစားအစာလှုံ့ဆျောမှုကိုအကျိုးသက်ရောက်နိုင်သည်ကိုညွှန်ပြနိုင်ဘူး။
နိဂုံးချုပ်အနေဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့၏အသစ်သောအချက်အလက်များသည် ghrelin အချက်ပြမှုသည် suolose ဆုလာဘ်နှင့် mesolimbic ဆုလာဘ်လမ်းကြောင်းရှိ dopaminergic နှင့် cholinergic gene expression များကိုအကျိုးသက်ရောက်ရန်အတွက် grrelin အချက်ပြမှုသည်အရေးကြီးကြောင်းအထောက်အထားအသစ်များပေးသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏တွေ့ရှိချက်များသည်သဘာ ၀ အကျိုးကျေးဇူးများဖြစ်သောသကြား၊ ပုံမှန်အစာစားမှုအပြုအမူနှင့်အစာစားခြင်းမမှန်ခြင်းနှင့်အဝလွန်ခြင်းတို့၏ရောဂါဗေဒဆိုင်ရာဇီဝကမ္မဗေဒတွင်အင်ဒိုးဂျင်းဂရီလင်၏အခန်းကဏ္ regarding နှင့်စပ်လျဉ်း။ အရေးကြီးသောမေးခွန်းများဖြစ်ပေါ်စေသည်။ သိသာထင်ရှားသည့်အလုပ်မှာ dopamine နှင့် acetylcholine စနစ်ရှိမော်လီကျူးပြောင်းလဲမှုများကို grrelin ၏အကျိုးသက်ရောက်မှုအပေါ်အကျိုးသက်ရောက်စေမှုအားဆက်နွယ်မှုရှိနေစေသော်လည်း၊ ကျွန်ုပ်တို့၏အချက်အလက်များသည် ghrelin သည်ဆုလာဘ်အပြုအမူအပေါ်အကျိုးသက်ရောက်စေသည့်နည်းလမ်းအသစ်တစ်ခုကိုညွှန်ပြနိုင်သည်။ Ghrelin ၏ဆုလာဘ်ဖြစ်စဉ်များကိုနားလည်ခြင်းသည်အစားအစာမမှန်ခြင်းနှင့်ဓာတုဆေးစွဲမှုများ၏ထပ်တူကျသော neurobiology နှင့်နားလည်ခြင်းတို့အတွက်၎င်းရောဂါများ၏ရောဂါဗေဒကိုနားလည်ရန်နှင့်အသစ်သောကုထုံးများ၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်အလားအလာရှိသောနည်းလမ်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ နောက်ဆုံးအနေဖြင့် GHS-R1A ရန်ကို သုံး၍ အာဟာရရှိသောချိုမြိန်သောအစာများစားသုံးခြင်းကိုနှိမ်နင်းရန်အလားအလာရှိသည့်ဒြပ်ပေါင်းများ၏သွေးထဲရှိဂလူးကို့စ်ထိန်းချုပ်မှုအပေါ်အကျိုးသက်ရောက်နိုင်မှုအတွက်လက်တွေ့နှင့်ကုထုံးဆိုင်ရာဆက်စပ်မှုရှိနိုင်သည်။နေ et al။ 2006) အမျိုးအစား2ဆီးချိုလူနာအတွက် (Esler et al။ 2007).
ဥရောပယူနီယံ 2006th မူဘောင် (FP5663-ကျန်းမာရေး-2009-266; FP7-KBBE-7-2009-241592); အဆိုပါဆေးပညာအဘို့အဆွီဒင်သုတေသနကောင်စီ (7-S2009 VR 3-245009) ကထောက်ခံသုတေသန ALF Göteborg (SU7601), ဆှီဒငျ Institute နှငျ့နှလုံးသွေးကြောဆိုင်ရာနှင့်အဲဒါတွေက Metabolic သုတေသန Sahlgrenska ရေးစင်တာမှမဟာဗျူဟာသုတေသနများအတွက်ဆွီဒင်ဖောင်ဒေးရှင်း (A305-188) ။ ငါတို့သည်လည်းတင်သွင်းခဲ့တဲ့နှင့်အတူအကူအညီများအတွက် GHS-R1A ရန် JMV2959 နှင့် Anders Friberg ပေးဘို့ဒေါက်တာဒံယလေသ Perrissoud (AeternaZentaris, GmbH, ဂျာမနီ) ကျေးဇူးတင်ချင်ပါတယ်။
KPS အားလုံးအမူအကျင့်လေ့လာမှုများဖျော်ဖြေခြင်းနှင့်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ, ဒီဇိုင်း, စတင်ခဲ့သည်။ CH အားလုံးဗီဇစကားရပ်လေ့လာမှုများဖျော်ဖြေခြင်းနှင့်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ။ EE လေ့လာမှုစတင်မှလှူဒါန်းခဲ့သည်။ SLD မှအကြီးတန်းစာရေးဆရာတစ်ယောက်, လူအပေါင်းတို့လေ့လာမှုများအဘို့ကြီးကြပ်မှုနှင့်ဘဏ္ဍာရေးဆိုင်ရာအကူအညီအထောက်အပံ့များပေး။ လက်ရေးမူများမှာတွေ့နိုင်ပါတယ် KPS နှင့် SLD အသုံးပြုနေသူများကဖန်တီးခဲ့တာအားလုံးစာရေးဆရာများနောက်ဆုံးစာသားအဖို့လှူဒါန်းခဲ့သည်။
Abizaid တစ်ဦးက, လျူ ZW, Andrews က ZB, Shanabrough M က, Borok အီး, Elsworth JD, Roth RH အ, Sleeman မဂ္ဂါဝပ်, Picciotto MR, Tschop MH, Gao xB, Horvath TL ။ အစာစားချင်စိတ်မြှင့်တင်နေချိန်တွင် Ghrelin midbrain dopamine အာရုံခံများ၏လှုပ်ရှားမှုများနှင့် Synaptic input ကိုအဖွဲ့အစည်းက modulates ။ J ကို Clin Invest ။ 2006; 116: 3229-3239 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Alsio J ကို, Olszewski PK, Norback AH, Gunnarsson ze, Levine AS, ကောက်ယူမှုကို C, Schioth HB ။ Dopamine D1 receptor မျိုးရိုးဗီဇစကားရပ်အရေးပါတယ်လို့အစားအစာမှရေရှည်ထိတွေ့မှုအပေါ်မှာနျူကလိယ accumbens အတွက်လျော့နည်းစေခြင်းနှင့်ကြွက်များတွင်အစားအသောက်များတွင်-သွေးဆောင်အဝလွန်ခြင်း phenotype ပေါ် မူတည်. ကွဲပြားနေသည်။ neuroscience ။ 2010; 171: 779-787 ။ [PubMed]
အာနိုးက M, Mura တစ်ဦးက, Langhans W က, Geary N. အူ vagal afferents ကြွက်များတွင် intraperitoneally ထိုးသွင်း Ghrelin ၏စား-stimulatory အကျိုးသက်ရောက်မှုများအတွက်လိုအပ်သောမရှိကြပေ။ J ကို neuroscience ။ 2006; 26: 11052-11060 ။ [PubMed]
ဘေလီအေအာရ်တီဆေး, Von Englehardt N ကို, Leng, G, စမစ် RG, Dickson SL ။ အဆိုပါ arcuate နျူကလိယနှင့် brainstem ၏ကြီးထွားမှုဟော်မုန်း secretagogue activation non-noradrenergic လမ်းကြောင်းကနေတဆင့်တွေ့ရှိနိုင်ပါသည်။ J ကို Neuroendocrinol ။ 2000; 12: 191-197 ။ [PubMed]
ဘဏ်များ WA, Tschop M က, ရော်ဘင်ဆင်သည် SM, Heiman ML ။ ထိုအသွေး-ဦးနှောက်အတားအဆီးကိုဖြတ်ပြီး ghrelin သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး၏အတိုင်းအတာများနှင့်ဦးတည်ချက်က၎င်း၏ထူးခြားသောမူလတန်းဖွဲ့စည်းပုံမှာကဆုံးဖြတ်တာဖြစ်ပါတယ်။ J ကို Pharmacol Exp Ther ။ 2002; 302: 822-827 ။ [PubMed]
ဘရောင်း CM, ဖလက်ချာ PJ, Coscina DV ။ sucrose များအတွက်တုံ့ပြန် Neuropeptide Y ကို-သွေးဆောင်အော်ပရေတာ dopamine ကကမကထပြုခဲ့ခြင်းမရှိပါ။ Peptides ။ 1998; 19: 1667-1673 ။ [PubMed]
Cowley MA, Smith က RG, Diano S က, Tschop M က, Pronchuk N ကို, Grove KL, Strasburger CJ, Bidlingmaier M က, Esterman M က, Heiman ML, Garcia က-Segura LM, Nillni EA ၏, Mendez P ကို, အနိမျ့ MJ, Sotonyi P ကို, Friedman JM, လျူ hy, Pinto က S, Colmers WF, Cone RD, Horvath TL ။ အဆိုပါ CNS အတွက် ghrelin ၏လုပ်ဆောင်ချက်၏ဖြန့်ဖြူးခြင်းနှင့်ယန္တရားစွမ်းအင် homeostasis ထိန်းညှိမယ့်ဝတ္ထု hypothalamic circuit ကိုပြသသည်။ အာရုံခံဆဲလျ။ 2003; 37: 649-661 ။ [PubMed]
Cragg SJ, Greenfield လုပ် SA ။ substantia nigra အတွက် somatodendritic နှင့် axon terminal ကို dopamine လွှတ်ပေးရန်, ventral tegmental ဧရိယာနှင့် striatum ၏ differential autoreceptor ထိန်းချုပ်မှု။ J ကို neuroscience ။ 1997; 17: 5738-5746 ။ [PubMed]
Cummings က DE, Purnell JQ, Frayo RS, Schmidova K ကို Wisse, Weigle DS BE ။ ပလာစမာ ghrelin အဆင့်ဆင့်အတွက်တစ်ဦးက preprandial မြင့်တက်လူသားတွေအတွက်မုန့်ညက်စတင်ထဲမှာအခန်းကဏ္ဍအကြံပြုထားသည်။ ဆီးချိုရောဂါ။ 2001; 50: 1714-1719 ။ [PubMed]
Dalley JW, Fryer TD, Brichard L ကို, ရော်ဘင်ဆင် ES, Theobald DE, Laane K ကို Pena Y ကို, Murphy က ER, Shah က Y ကို, Probst K ကို Abakumova ငါ Aigbirhio FI, Richards ဟောင်ကောင်, ဟောင်ကောင် Y ကို, Baron JC, Everitt BJ, Robbins TW ။ နျူကလိယ D2 /3receptors ရို Impulse နှင့်ကိုကင်းအားဖြည့်ကြိုတင်ခန့်မှန်း accumbens ။ သိပ္ပံ။ 2007; 315: 1267-1270 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
နေ့စွဲ Y ကို, Murakami N ကို, Toshinai K ကို Matsukura S က, Niijima တစ်ဦးက, Matsuo H ကို, Kangawa K ကို Nakazato အမ်ကြွက်များတွင် ghrelin-သွေးဆောင်နို့တိုက်ကျွေးခြင်းနှင့်ကြီးထွားဟော်မုန်း Secret အတွင်းအစာအိမ် afferent vagal အာရုံကြောများ၏အခန်းကဏ္ဍကို။ Gastroenterology ။ 2002; 123: 1120-1128 ။ [PubMed]
Diano S က, တတ်ကြ၏လုပ် SA, Benoit SC, McNay EC, da Silva ငါ Horvath B, Gaskin FS, Nonaka N ကို, Jaeger LB, ဘဏ်များ WA, Morley je, Pinto က S, Sherwin RS, Xu L ကို, Yamada Ka, Sleeman မဂ္ဂါဝပ်, Tschop MH, Horvath TL ။ Ghrelin hippocampal ကျောရိုး synapses သိပ်သည်းဆနှင့်မှတ်ဉာဏ်စွမ်းဆောင်ရည်ကိုထိန်းချုပ်သည်။ သဘာဝတရားအာရုံကြောသိပ္ပံ။ 2006; 9: 381-388 ။ [PubMed]
Dickson SL, Hrabovszky အီး, Hansson က C, Jerlhag အီး, Alvarez-Crespo M က, Skibicka KP, Molnar CS, Liposits Z ကို, အိန်ဂျယ်ဂျာအလယ်ပိုင်းနီကိုတင်း acetylcholine အဲဒီ receptor အချက်ပြ၏ Egecioglu အီးပိတ်ဆို့ကြွက်များတွင် ghrelin-သွေးဆောင်အစားအစာစားသုံးမှု attenuate ။ neuroscience ။ 2010; 171: 1180-1186 ။ [PubMed]
Dickson SL, Leng, G, ရော်ဘင်ဆင် ICAF ။ ကြီးထွားဟော်မုန်း-releasing peptide ၏ system administrator hypothalamic arcuate အာရုံခံမြှင့်လုပ်ဆောင်။ neuroscience ။ 1993; 53: 303-306 ။ [PubMed]
Dickson SL, Luckman သည် SM ။ GH-releasing peptide-6 အဆိုပါ GH secretagogue ၏စနစ်တကျဆေးထိုးပြီးနောက်ကြွက် arcuate နျူကလိယထဲမှာအချက်တစ်ချက်တွင် neuron -releasing neuropeptide Y နှင့်ကြီးထွားဟော်မုန်း (GH) တွင်က c-fos တမန် ribonucleic အက်ဆစ်၏ induction ။ ဟိုမုန်းစနစ်ဘာသာရပ်။ 1997; 138: 771-777 ။ [PubMed]
Dornonville de la Cour CD ကို, Björkqvist M က, Sandvik AK, Bakke ငါ Zhao နှင့် CM, Chen က D:, ကြွက်အစာအိမ်အတွက်Håkanson R. တစ်ဦးကဲ့သို့ဆဲလ် ghrelin ဆံ့နှင့် gastrin ထိန်းချုပ်မှုအောက်တွင်လည်ပတ်ကြပါဘူး။ စည်းမျဉ်း Pept ။ 2001; 99: 141-150 ။ [PubMed]
Dornonville de la Cour CD ကို, Lindqvist တစ်ဦးက, Egecioglu အီး, Tung YCL, Surve V ကို, Ohlsson ကို C, Jansson Jo, Erlanson-Albertsson ကို C, Dickson SL, Hakanson R. Ghrelin ကုသမှု gastrectomised ကြွက်တွေမှာကိုယ်အလေးချိန်နှင့်ခန္ဓာကိုယ်အဆီထဲမှာလျှော့ချရေးနောက်ကြောင်းပြန်။ အူ။ 2005; 54: 907-913 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Egecioglu အီး, Jerlhag အီး, Skibicka S ကိုရှာလုံ N ကို, Haage: D, Bohlooly YM, Andersson: D, Bjursell M က, Perrissoud: D, အိန်ဂျယ်ဂျာ Dickson SL ။ Ghrelin ကြွက်များတွင်အရေးပါတယ်လို့အစားအစာစားသုံးမှုတိုးပွားစေပါသည်။ စှဲလမျးသူ Biol ။ 2010; 15: 304-311 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
အိန်ဂျယ်ဂျေအေ။ ; Excerta Medica: အရက်၏လေ့လာမှု (Excerpta Medica အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာကွန်ဂရက်စီးရီး) အမ်စတာဒမ်တွင်လတ်တလောတိုးတက်လာတာနဲ့အမျှ 1977 ။ မှီခိုထုတ်လုပ်မူးယစ်ဆေးဝါးများအားဖြင့်သွေးဆောင်အဆိုပါ europhoria ၏ Neurochemical ရှုထောင့်, စစ။ 16-22 ။
Esler WP, Rudolph J ကို, Claus TH, တန် WF, Barucci N ကို, Brown က SE, Bullock W က, Daly က M, DeCarr L ကိုလီ YX, Milardo L ကို, Molstad: D, Zhu J ကို, Gardell SJ, Livingston ဖြစ်မှု, Sweet LJ ။ အသေးစား-မော်လီကျူး ghrelin အဲဒီ receptor ရန်ဂလူးကို့စသည်းခံစိတ်တိုးတက်ကောင်းမွန်အောင်, အစာစားချင်စိတ်ဖိနှိပ်နှင့်ကိုယ်အလေးချိန်မြှင့်တင်ရန်။ ဟိုမုန်းစနစ်ဘာသာရပ်။ 2007; 148: 5175-5185 ။ [PubMed]
Faulconbridge LF, Cummings က DE, Kaplan JM, ကင် HJ ။ brainstem ghrelin အုပ်ချုပ်ရေး Hyperphagic ဆိုးကျိုးများ။ ဆီးချိုရောဂါ။ 2003; 52: 2260-2265 ။ [PubMed]
Faulconbridge LF, ကင် HJ, Kaplan JM, ghrelin ၏ Daniels ဃ Caudal brainstem ပေးပို့ဆိတ်ညံကျေးရွာအုပ်စုများ၏-နျူကလိယထဲတွင်ပေမယ့်မ hypothalamus ၏ arcuate သို့မဟုတ် paraventricular အရေးပါအတွက် fos စကားရပ်ဖြစ်ပေါ်သည်။ ဦးနှောက် Res ။ 2008; 1218: 151-157 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Figlewicz DP, Bennett က JL, Naleid လေး, Davis ကနေ C, Grimm JW ။ Intraventricular အင်ဆူလင်နှင့် leptin ကြွက်များတွင် sucrose Self-အုပ်ချုပ်ရေးလျော့ကျသွားသည်။ Physiol ပြုမူနေ။ 2006; 89: 611-616 ။ [PubMed]
Gualillo အို Caminos je, Nogueiras R ကို, Seoane LM, Arvat အီး, Ghigo အီး, Casanueva FF, အစားအစာကန့်သတ်များ၏ Dieguez C. Effect ပုံမှန်-စက်ဘီးအမျိုးသမီးကြွက်များနှင့်ကိုယ်ဝန်အတွက် ghrelin ပေါ်မှာ။ အဝလွန်ခြင်း Res ။ 2002; 10: 682-687 ။ [PubMed]
Hewson AK, Dickson SL ။ ghrelin ၏ system administrator Fast အောင်ကျွေးကြွက်များ၏ hypothalamic arcuate နျူကလိယအတွက် Fos နှင့် Egr-1 ပရိုတိန်းဖြစ်ပေါ်သည်။ J ကို Neuroendocrinol ။ 2000; 12: 1047-1049 ။ [PubMed]
ဆုလာဘ်အစွမ်းသတ္တိ၏တစ်ဦးအတိုင်းအတာအဖြစ် Hodos ဒဗလျူတိုးတက်ရေးပါတီအချိုးအစား။ သိပ္ပံ။ 1961; 134: 943-944 ။ [PubMed]
Hoebel BG, Avena မိုင်, Rada P. ချဉ်းကပ်မှုနှင့်ရှောင်ရှားခြင်းအတွက် dopamine-acetylcholine ချိန်ခွင်လျှာ Accumbens ။ Curr Opin Pharmacol ။ 2007; 7: 617-627 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Holst B, Cygankiewicz တစ်ဦးက, Jensen TH, Ankersen M က, Schwartz TW ။ အဆိုပါ ghrelin အဲဒီ receptor ၏မြင့်မားသောဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေအချက်ပြ - တဲ့အစွမ်းထက်ပြောင်းပြန် agonist ၏မှတ်ပုံတင်။ Mol Endocrinol ။ 2003; 17: 2201-2210 ။ [PubMed]
Howard အေဒီ, Feighner SD, Cully DF, Arena JP, Liberation PA ဆိုပြီး, ဘလမ် CI, Hamelin M က, Hreniuk DL, Palyha OC, Anderson က J ကို, Paress PS, Diaz ကို C, Chou က M, လျူ KK, McKee KK, Pong အက်စ်အက်စ်ချောင်းဆုံ Ly , Elbrecht တစ်ဦးက, Dashkevicz M က, ကောင်းကင် R ကို, Rigby M က, Sirinathsinghji DJS, ဒင်း, DC, Melillo DG, Patchett AA ကို, Nargund R ကို, Griffin PR စနစ်, DeMartino ဂျာ Gupta SK ကို, Schaeffer JM, Smith က RG, VanderPloeg LHT ။ ကြီးထွားဟော်မုန်းလွှတ်ပေးရန်အတွက်လုပ်ဆောင် pituitary နှင့် hypothalamus အတွက်တစ်ဦးကအဲဒီ receptor ။ သိပ္ပံ။ 1996; 273: 974-977 ။ [PubMed]
ghrelin ၏ Jerlhag အီးစနစ်အုပ်ချုပ်ရေး conditional ရာအရပျ preference ကို induces နှင့် accumbal dopamine လှုံ့ဆော်။ စှဲလမျးသူ Biol ။ 2008; 13: 358-363 ။ [PubMed]
Jerlhag အီး, Egecioglu အီး, Dickson SL, Andersson က M, Svensson L ကို, အိန်ဂျယ်ဂျေအေ။ Ghrelin ကြွက်များတွင်အလယ်ပိုင်း cholinergic စနစ်များမှတဆင့် locomotor လှုပ်ရှားမှုနဲ့ accumbal dopamine-လျတ်လှုံ့ဆော်: ဦးနှောက်ကိုဆုလာဘ်အတွက်၎င်း၏ပါဝင်ပတ်သက်မှုများအတွက်ဂယက်ရိုက်။ စှဲလမျးသူ Biol ။ 2006; 11: 45-54 ။ [PubMed]
Jerlhag အီး, Egecioglu အီး, Dickson SL, Douhan တစ်ဦးက, Svensson L ကို, အိန်ဂျယ်ဂျေအေ။ tegmental ဒေသများသို့ Ghrelin အုပ်ချုပ်ရေး locomotor လှုပ်ရှားမှုလှုံ့ဆော်နှင့်နျူကလိယ accumbens အတွက် dopamine ၏ extracellular အာရုံစူးစိုက်မှုတိုးပွားစေပါသည်။ စှဲလမျးသူ Biol ။ 2007; 12: 6-16 ။ [PubMed]
Jerlhag အီး, Egecioglu အီး, Dickson SL, Svensson L ကို, အိန်ဂျယ်ဂျေအေ။ alpha-conotoxin MII-အထိခိုက်မခံနီကိုတင်း acetylcholine receptors နျူကလိယ accumbens အတွက် ghrelin-သွေးဆောင် locomotor ဆွနဲ့ dopamine လျတ်ဖြန်ဖြေတွင်ပါဝင်ပတ်သက်နေကြသည်။ EUR Neuropsychopharmacol ။ 2008; 18: 508-518 ။ [PubMed]
Jerlhag အီး, Egecioglu အီး, Landgren S ကိုရှာလုံ N ကို, Heilig M က, Moechars: D, Datta R ကို, Perrissoud: D, Dickson SL, အိန်ဂျယ်ဂျေအေ။ အရက်ဆုလာဘ်ဘို့အချက်ပြအလယ်ပိုင်း ghrelin ၏လိုအပ်ချက်။ proc Natl Acad သိပ္ပံအမေရိကန်အေ 2009; 106: 11318-11323 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Jewett, DC, Cleary J ကို, Levine AS, Schaal DW, neuropeptide Y ကို, အင်ဆူလင်, 2-deoxyglucose နှင့်အစားအစာ-လှုံ့ဆော်မှုအပြုအမူအပေါ်အစားအသောက်ဆင်းရဲချို့တဲ့မှု Thompson က T. အကျိုးသက်ရောက်မှု။ Psychopharmacology ။ 1995; 120: 267-271 ။ [PubMed]
စိတ်အားထက်သန်-Rhinehart အီး, Bart တီဂျေ။ MTII အစားအသောက်သိုလှောင်နှင့်အစားအစာစားသုံးမှုအတွက် ghrelin- နှင့်အစားအစာဟာဆင်းရဲချို့တဲ့-သွေးဆောင်တိုး attenuates ။ Horm ပြုမူနေ။ 2007a; 52: 612-620 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
စိတ်အားထက်သန်-Rhinehart အီး, Bart တီဂျေ။ NPY Y1 အဲဒီ receptor forage, အစားအစာသိုလှောင်နှင့်အစားအစာစားသုံးမှုအတွက် ghrelin- နှင့်အစာရှောင်ခြင်း-သွေးဆောင်တိုးတွင်ပါဝင်ပတ်သက်သည်။ Integrated comp Physiol စည်းမျဉ်း J ကို Physiol ဖြစ်၏။ 2007b; 292: R1728-1737 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Kojima M က, Hosoda H ကို, နေ့စွဲ Y ကို, Nakazato M က, Matsuo H ကို, Kangawa K. Ghrelin အစာအိမ်ကနေကြီးထွား-ဟော်မုန်း-releasing acylated peptide ဖြစ်ပါတယ်။ သဘာဝ။ 1999; 402: 656-660 ။ [PubMed]
Koob gf ။ ဆုလာဘ်လမ်းကြောင်း၏ခန္ဓာဗေဒ, ဆေးဝါးဗေဒနှင့် function ကို - အလွဲသုံးစားမှုမူးယစ်ဆေးဝါး။ ခေတ်ရေစီးကြောင်း Pharmacol သိပ္ပံ။ 1992; 13: 177-184 ။ [PubMed]
Kuzmin တစ်ဦးက, Jerlhag အီး, Liljequist S ကို, အော်ပရေတာအီသနော Self-အုပ်ချုပ်ရေးနှင့် relapse ကဲ့သို့အီသနော-အရက်သောက်အပြုအမူအပေါ် subunit ရွေးချယ် nACh receptors ၏အိန်ဂျယ်ဂျေအကျိုးသက်ရောက်မှု။ Psychopharmacology ။ 2009; 203: 99-108 ။ [PubMed]
la Fleur SE, Vanderschuren LJ, Luijendijk MC, Kloeze BM, Tiesjema B, သွားလေ၏ RA ။ အစားအစာ-လှုံ့ဆော်မှုအပြုအမူများနှင့်အစားအစာ-သွေးဆောင်အဝလွန်ခြင်းအကြားတစ်ဦးကအပြန်အလှန်အပြန်အလှန်။ int J ကိုအဝလွန်ခြင်း။ 2007; 31: 1286-1294 ။ [PubMed]
Lee က B ကို, လန်ဒန် ED, Poldrack RA, Farahi J ကို, Nacca တစ်ဦးက, Monterosso JR, Mumford ဂျာ Bokarius AV စနစ်, Dahlbom M က, Mukherjee က J ကို, Bilder RM, Brody AL, Mandelkern MA ။ Striatal dopamine d2 / d3 အဲဒီ receptor ရရှိနိုင်မှုစိတ်ကြွဆေးမှီခိုအတွက်လျှော့ချနှင့် Impulse ဆက်စပ်နေပါတယ်။ J ကို neuroscience ။ 2009; 29: 14734-14740 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Livak KJ, Schmittgen TD ။ Real-time အရေအတွက် PCR နှင့်2(-delta မြစ်ဝကျွန်းပေါ်ကို C (T)) method ကိုသုံးပြီးဆွေမျိုးဗီဇစကားရပ်အချက်အလက်များ၏ analysis ။ နည်းလမ်းများ။ 2001; 25: 402-408 ။ [PubMed]
Nakazato M က, Murakami N ကို, နေ့စွဲ Y ကို, Kojima M က, Matsuo H ကို, Kangawa K ကို Matsukura အက်စ်နို့တိုက်ကျွေးရေး၏ဗဟိုစည်းမျဉ်းထဲမှာ ghrelin တစ်အခန်းကဏ္ဍ။ သဘာဝ။ 2001; 409: 194-198 ။ [PubMed]
Naleid လေးရေ့ MK, Cummings က DE, Levine AS ။ Ghrelin အဆိုပါ ventral tegmental ဧရိယာနှင့်နျူကလိယ accumbens အကြား mesolimbic ဆုလာဘ်လမ်းကြောင်းထဲမှာအစာကျွေးဖြစ်ပေါ်သည်။ Peptides ။ 2005; 26: 2274-2279 ။ [PubMed]
Nimitvilai S က, Brody က MS ။ အဆိုပါ ventral tegmental ဧရိယာ၏ dopaminergic အာရုံခံ၏ကြာရှည် dopamine တားစီး၏ပြောင်းပြန်။ J ကို Pharmacol Exp Ther ။ 2010; 333: 555-563 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Nogueiras R ကို, Tschöp MH, Zigman JM ။ စွမ်းအင်ဇီဝြဖစ်၏ဗဟိုအာရုံကြောစနစ်စည်းမျဉ်း - leptin နှိုင်းယှဉ် ghrelin ။ အမ်းနယူးယော့ Acad သိပ္ပံ။ 2008; 1126: 14-19 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Paxinos, G, Stereotaxic Coordinates အတွက် Watson ဟာ C. အဆိုပါ Rat ဦးနှောက်။ နယူးယောက်: ပညာရေးဆိုင်ရာစာနယ်ဇင်း, နယူးယောက်, 1986 ။
Perello M က, Sakata ငါ Birnbaum က S, Chuang JC, Osborne-လောရင့်က S, Rovinsky လုပ် SA, Woloszyn J ကို, Yanagisawa က M, Lutter M က, Zigman JM ။ Ghrelin တစ်ခု orexin-မှီခိုထုံးစံ၌ High-အဆီအစားအစာများ၏အကြိုးတန်ဖိုးကိုတိုးပွားစေပါသည်။ Biol စိတ်ရောဂါကုသမှု။ 2010; 67: 880-886 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Pratt WE, Blackstone K. နျူကလိယ acetylcholine နှင့်အစားအစာစားသုံးမှု accumbens: အစားအစာ-ရှာကျွေးသော်လည်းမလျော့နည်းစေ muscarinic သေံလျော့နည်းသွားသည်။ ပြုမူနေဦးနှောက် Res ။ 2009; 198: 252-257 ။ [PubMed]
Pratt WE, ကယ်လီ AE ။ Striatal muscarinic အဲဒီ receptor ဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်ခြင်း preproenkephalin ဗီဇစကားရပ်လျော့နည်းသွားနှင့်အတူအသင်းအဖွဲ့အတွက် 24-ဇအစားအစာစားသုံးမှုလျော့နည်းစေသည်။ EUR J ကို neuroscience ။ 2005; 22: 3229-3240 ။ [PubMed]
Ritter RC, Slusser PG, ကျောက်ခေတ်အက်စ် Glucoreceptors နို့တိုက်ကျွေးခြင်းနှင့်သွေးဂလူးကို့စကိုထိန်းချုပ် - ထို hindbrain အတွက်တည်နေရာ။ သိပ္ပံ။ 1981; 213: 451-453 ။ [PubMed]
ရှာလုံ N ကို, Haage: D, Perrissoud: D, Moulin တစ်ဦးက, Demange L ကို, Egecioglu အီး, Fehrentz ဂျာ Martinez J ကို, Dickson SL ။ Anorexigenic နှင့်ကြွက်များတွင်ဝတ္ထု ghrelin အဲဒီ receptor ၏ electrophysiological လုပ်ရပ်များ (GHS-R1A) ရန်။ EUR J ကို Pharmacol ။ 2009a; 612: 167-173 ။ [PubMed]
Salomé N, Hansson C, Taube M, Gustafsson-Ericson L, Egecioglu E, Karlsson-Lindahl L, Fehrentz JA, Martinez J, Perrissoud D, Dickson SL ။ ghrelin ၏ကြွက်များတွင်အဝလွန်ခြင်း၏နာတာရှည်သက်ရောက်မှုများကိုအခြေခံသည့်ယန္တရားတွင် - အစွမ်းထက်သော ghrelin receptor ရန်ကိုအသုံးချသည့်လေ့လာမှုများမှအသစ်သောအမြင်များ။ J ကို Neuroendocrinol ။ 2009b; 21: 777-785 ။ [PubMed]
Sibilia V ကို, Lattuada N ကို, Rapetti: D, Pagani က F, Vincenza: D, Bulgarelli ငါ Locatelli V ကို, Guidobono က F, Netti C. Ghrelin ကြွက်များတွင်ရောင်ရမ်းနာကျင်မှုဖြစ်စဉ်ကိုတားဆီးပေးပါတယ်: အ opioid စနစ်၏ပါဝင်ပတ်သက်မှု။ Neuropharmacology ။ 2006; 51: 497-505 ။ [PubMed]
Skibicka KP, Alhadeff AL, ကင် HJ ။ Hindbrain cocaine- နှင့်စိတ်ကြွဆေး-စည်းမျဉ်းသတ်မှတ်မှတ်တမ်း GLP-1 receptors ကကမကထပြုခဲ့ hypothermia ဖြစ်ပေါ်သည်။ J ကို neuroscience ။ 2009; 29: 6973-6981 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
နေရောင် Y ကို, Asnicar M က, Saha PK, ချမ်း L ကို, Smith က RG ။ ghrelin ၏ Ablation ob / ob ကြွက်များ၏ဆီးချိုပေမယ့်အဝလွန်မဟုတ် phenotype ပိုမိုကောင်းမွန်စေတယ်။ cell Metab ။ 2006; 3: 379-386 ။ [PubMed]
Toshinai K သည်, Y ကို, Murakami N ကို, Shimada က M ကို, Mondal က MS, Shimbara T က, ဂွမ် JL, ဝမ် QP, Funahashi H ကို, Sakurai T က, Shioda S က, Matsukura S က, Kangawa K ကို Nakazato အမ် Ghrelin-သွေးဆောင်အစားအစာစားသုံးမှုမှတဆင့်ကမကထပြုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်နေ့စွဲ အဆိုပါ orexin လမ်းကြောင်း။ ဟိုမုန်းစနစ်ဘာသာရပ်။ 2003; 144: 1506-1512 ။ [PubMed]
Tracy AL, Clegg DJ သမား, ဂျွန်ဆင် JD, Davidson TL, Benoit SC ။ အဆိုပါ melanocortin တစ်ဦးအဆီအဘို့အရန် AgRP, ဒါပေမယ့်မ (83-132) အစာစားချင်စိတ်တုံ့ပြန်ဘိုဟိုက်ဒရိတ်, စစ်ကူတိုးပွားစေပါသည်။ Pharmacol ထဲကဓာတုပစ်စညျးပြုမူနေ။ 2008; 89: 263-271 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Wren လေး, အထိမ်းအမှတ်တံဆိပ် LJ, Cohen ကို MA, Brynes AE, Frost က GS, မာဖီကီလိုဂရမ်, Dhillo WS, Ghatei MA, Bloom SR ။ Ghrelin စာစားချင်စိတ်ကိုပိုကောင်းစေပါတယ်နှင့်လူသားတွေအတွက်အစားအစာစားသုံးမှုတိုးပွားစေပါသည်။ J ကို Clin Endocrinol Metab ။ 2001; 86: 5992-5995 ။ [PubMed]
Wren လေး, အသေးစား CJ, ရပ်ကွက် HL, မာဖီကီလိုဂရမ်, Dakin CL, Taheri S က, ကနေဒီ AR, Roberts သည် GH, မော်ဂန် DGA, Ghatei MA, Bloom SR ။ အဆိုပါဝတ္ထု hypothalamic peptide ghrelin အစားအစာစားသုံးမှုနှင့်ကြီးထွားဟော်မုန်းလျှို့ဝှက်ချက်ကိုလှုံ့ဆျော။ ဟိုမုန်းစနစ်ဘာသာရပ်။ 2000; 141: 4325-4328 ။ [PubMed]
Zheng H ကို, Lenard အဆိုအရရော်ဘာ, ရှင် AC အ, Berthoud HR ။ အစာစားချင်စိတ်ကိုထိန်းချုပ်နှင့်ခေတ်သစ်ကမ္ဘာကြီးထဲမှာစွမ်းအင်ဟန်ချက်စည်းမျဉ်း: ဆုလာဘ်-မောင်းထုတ်ဦးနှောက်တှေအမြားကွီးအချက်ပြမှုများကိုပြောင်းလဲသတ်မှတ်လိုက်သည်။ int J ကိုအဝလွန်ခြင်း။ 2009; 33 (ပျော့ပျောင်း2။ ): S8-S13 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Zigman JM, ဂျုံးစ် je, Lee ကအီး, Saper သမဝါယမ, Elmquist JK ။ ghrelin ကြွက်များတွင်အဲဒီ receptor mRNA နှင့်မောက်စ်သည်ဦးနှောက်၏ expression ။ J ကို comp Neurol ။ 2006; 494: 528-548 ။ [PubMed]